IMIPHEZULU YEETAFILE ZEQUARTZ (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Imiphezulu yeetafile zeQuartz (Isikhokelo sokugqibela)
Imiphezulu yeetafile zeQuartz (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokugqibela seetafile ze-quartz kubandakanya i-pros kunye ne-cons, imifanekiso, uyilo lwekhitshi kunye nokunye okuninzi.
Imiphezulu yeetafile zeQuartz zihlala zididekile ne-quartz yamatye endalo. Ukungaqondi okuqhelekileyo malunga neetafile ze-quartz kukuba zi-100% zenziwe nge-quartz emsulwa yendalo, kodwa enyanisweni, imiphezulu yeetafile zekartz zenziwe ngabantu kwaye zenziwe zezinye izinto ngokunjalo.
I-quartz esulungekileyo, ekwabizwa ngokuba yi-Rock Crystal, luhlobo lwesimbiwa esingenambala esingenambaliso esikrolwe emhlabeni ngohlobo lwee-slabs. Ngelixa i-quartz edla ngokubhekiswa kuyo xa kuthethwa ngee-countertops, luhlobo lwelitye elenziwe ngobunjineli. Yenziwe ngaphezulu kwe-90% yemathiriyeli yendalo eyi-93% yokuqhekeza umgubo we-quartz kunye ne-7% yezibophelelo ezisekwe kwi-polymeric esekwe okanye kwisamente, kunye nodidi lwe-epoxy resin.
Ukongezwa kwezibophelelo kunye nentlaka kugcina amasuntswana otyunyuziweyo kunye kwaye komeleza ukomelela kwento leyo. Yiyo loo nto i-quartz ikwabizwa ngokuba lilitye elinobunjineli okanye ilitye elimbaxa ngenxa yokwakheka kwezinto ezibonakalayo. I-Quartz inzima kakhulu kwaye ine-granite efana nomphezulu, Umntu wenza ii-pigment zongezwa kolu xuba ukunika ilitye eliyinjineli imibala eyahlukileyo.
I-Quartz ikwenziwe ukuba ibonakale njengelitye lendalo. Iphantse yafana negranite, imarble kunye nelitye lekalika, kodwa inika isibonelelo sokuqina kwaye somelele ngakumbi. Ngenxa yokuba imiphezulu yeetafile ze-quartz zenziwe ngobunjineli, inokuveliswa nakweyiphi na imibala ngokusetyenziswa kombala. Iza ngemibala eyahlukileyo, ukusuka ekungathathi hlangothi njengamhlophe, beige, browns, ngwevu kunye nabantsundu kwimibala efihlakeleyo eblue, eluhlaza, epinki okanye emnyama ngombala obomvu, igolide okanye amalahle.
Umphezulu we-quartz nawo une-veining kunye namachaphaza afana ne marble kunye negranite. Ukubonakala kwayo kuxhomekeke kwindlela i-quartz esemhlabeni ngayo. I-quartz yomhlaba ecekeceke ivelise ilitye elinobunjineli kunye nomphezulu ogudileyo, ngelixa i-quartz yomhlaba erhabaxa ivelisa ukubonakala okukhoyo. Ukongeza kwi-tht, ezinye iintlobo zezinto ezinje ngeglasi kunye nelitye zinokufakwa kwizinto ezenziwa nge-quartz ukuyenza ukuba ibonakale ngakumbi.
Imvelaphi yeeQuartz countertops
Iimveliso zeQuartz Countertops
Umthengi wee-Quartz Countertops
Ixabiso leemiphezulu zeetafile zeQuartz
Imibala yeemitha zeQuartz
UBrown kunye neGoldartz
Luhlaza, Luhlaza kunye noBomvu Quartz
Lungisa imiphezulu yeetafile zwi
Iitafile zeQuartz ezenziwe ngobunjineli
Imiphetho ye-Quartz Countertop
Ukutyeba kweTafile yeQuartz
Imiphezulu yeetafile zwi Kugqityiwe
Imiphezulu yeetafile zeQuartz zangasese
Imiphezulu yeetafile zeQuartz eziJongeka njengeMarble
Best imiphezulu yeetafile zwi
Ufakelo imiphezulu yeetafile zwi
Amanyathelo okufaka ii-quartz countertops
Uyinyamekela njani imiphezulu yeetafile zeQuartz
Uyicoca njani imiphezulu yeetafile zeQuartz
Uyenza njani imiphezulu yeetafile zeQuartz
I-quartz echanekileyo yeyona minerali ininzi emhlabeni, ngelixa iyenye yezona zinzima. Ngaphezulu kweminyaka engama-50 eyadlulayo, imveliso yabona amandla ayo amakhulu ukuba asetyenziswe njengempahla yomhlaba yezicelo zangaphakathi. Ukudibanisa iipropathi zendalo ze-quartz amaminerali kunye nezinye izinto ezingezizo ezakhokelela kwimveliso yenye yezona ndawo ziphambili zokuphakama ezikhoyo kwimarike. Nguye kuphela umntu owenziwe ngezinto ezihambelana nokuqina kunye namandla eetafile zamatye endalo.
UMarcello Toncelli wasungula i-quartz yokuqala eyayigalelwa ngesandla kwisilayidi esincinci esizi-intshi ezili-12 nge-intshi ezingama-29 Kukho iintlobo ezahlukeneyo zekartz kwimarike kodwa amalungelo awodwa omenzi wechiza yeyenkampani yase-Italiya, iBreton eyaqala ukuvelisa le mveliso. ebutsheni beminyaka yee-1960. UBreton wasungula inkqubo ye-quartz yobunjineli ngokucinezela umgubo wamatye wendalo kunye nentlaka yepolymer kunye. Kuze kube ngumhla, iBreton iyaqhubeka ngumthengisi okhokelayo we-quartz kunye nezixhobo zokwenza amatye kwimarike.
Imiphezulu yeetafile yeQuartz yafumana ukuthandwa kwayo kwiikhitshi zaseYurophu emva koko yasasazeka eMelika. I-Silestone kunye ne-Caesarstone zezona zinto zaziwa kakhulu kwiitafile ze-quartz. Olunye uhlobo oludumileyo lwee-countertops ze-quartz yiCambria, iDuPont, iZodiaq, Celador, LG Viatera, Avanza kunye neTechnistone. Ezi nkampani zizama ukwenza umgca wazo othile we-quartz kunye nephethini yokwahlula uphawu lwazo kwabanye.
Ukulunga kweeComputer zeQuartz
Ubuhle -I-Quartz inobuhle obufana nelitye lendalo. Ukubonakala kwayo kathathu kunye nokubengezela kwendalo kwenza ukuba kubonakale kubaninimzi abaninzi.
Ukuqina okuphezulu - Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-quartz emsulwa ilukhuni ngokwemvelo kwaye iyayidibanisa ne-resin binders yomeleza ukomelela nokuqina okwenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zithenjiweyo zinokuthenjwa kwintengiso. Ukusebenza ngobulumko, imiphezulu yeetafile zekota zikumgangatho wekonkriti kunye negranite. Iyaxolela ngakumbi xa ithelekiswa nelitye lendalo kwaye ayizukuqhekeka okanye i-chip ngokulula. Yenza indawo elungileyo yokusebenza.
Ukuqala ukumelana -Iitafile zeQuartz zixhathisa ukonakala komhlaba njengamazinyo, iintanda kunye neetshiphusi. Ingasetyenziswa njengendawo yokusika njengoko ingazukuchaphazeleka ziimpawu zemela. Iipads ezirhabaxa nazo aziyongozi kwimiphezulu yeetafile zekartz.
Ukumelana nobushushu -I-Quartz ayinabushushu, kodwa kuphela lixesha elincinci. Ayizukuonakala ngokulula xa inxibelelana ngequbuliso neepani ezishushu okanye iimbiza kunye nezitya ezishushu zokutya nazo azinabungozi kumphezulu wayo. Nangona kunjalo, oku kuphela ukuya kwinqanaba. Ukuyichaza ixesha elide kakhulu kumaqondo aphezulu kunokubangela umonakalo.
I-porosity ephantsi -I-Quartz ineqondo eliphantsi lokufunxa elingange-0.5% kwaye iyafana nethayile ye-porcelain. Imiphezulu yeetafile zeQuartz azinakungeniswa nangaluphi na uhlobo lokufuma kunye nolwelo ngenxa yezibophelelo zentlaka ezenza umphezulu wazo. Ngama-countertops amatye endalo, amanzi achithakeleyo kunye nolunye ulwelo kufuneka lusulwe kwangoko
Stain ukumelana -I-Quartz ayisiyongxaki ngenxa yoko iyala ukubala ngcono kunamatye endalo njengegranite okanye imarble. Sukuma ulwelo oluphalazileyo njengamanzi, ijusi, ioyile, iwayini, ikofu kunye neziselo ezinxilisayo.
Iintsholongwane -Iitafile zeQuartz zinciphisa ukukhula kwebacteria kuba akukho thuba lokuba amanzi akhe, angene kwaye angene emzimbeni nasempahleni. Ukongeza kuloo nto, imiphezulu yeetafile zekartz ayifuni i-grout yofakelo kwaye sonke siyazi ukuba imigca ye-grout kunye nemigangatho zezona ndawo zisemngciphekweni kakhulu wee-countertops kuba ivumela ukungcola kunye ne-grime ukubambeka ngaphakathi kwezikhewu. Ngenxa yoko, ivumba elibangela ukungunda kunye nokungcola kuthintelwe kwaye intsholongwane okanye ibhaktiriya ayifakwanga.
Ukugcinwa okuphantsi Ukugcinwa kwemihla ngemihla kwiitafile ze-quartz kufuna umgudu omncinci. Into oyifunayo sisiqwenga selaphu elifumileyo kunye nesepha ethambileyo kunye nesisombululo samanzi. Ukukhuhla ngobumnene kuko konke okudingayo ukuze ususe amabala.
Akukho sidingo sokuthengisa kwakhona -Ilitye lendalo kufuneka litywinwe ngaphambi kokuba lisetyenziswe kwaye lifumane unyango lwexesha ukuqinisekisa ukuba likhuselwe ngokufanelekileyo ekuchithekeni kolwelo nakumanzi anokungena kumphezulu wawo. Ngemiphezulu yeetafile ze-quartz, akukho mfuneko yokuba ingenakuthintelwa emanzini nakumswakama. Ngenxa yoko, oku kufana nokonga okubalulekileyo ngokwemiqathango yolondolozo.
Imbonakalo efanayo -Ngokungafaniyo nelitye lendalo elihlala linombala ongahambelaniyo ngenxa yokuba ikrolwa kwiizilebhu, imiphezulu yeetafile zekartz zinombala ofanayo nofanayo kuyo yonke indawo. Umzekelo, i-Granite, umzekelo, kufuneka ithengwe kwibhetshi enye ukuze kuqinisekiswe ukuba umbala uyincwadi ehambelana nayo, kodwa kwilitye lobunjineli, kukho umbala ofanayo kunye notshintsho olugudileyo. Ezi zinto zilungele ukusetyenziswa imiphezulu yeekhithi countertops siqithi kwaye ikwayindlela efanelekileyo yokubala abanini makhaya abo ikakhulu xa kufikwa kwiziphene nakukungafezeki kwendalo. Ukuthungwa kweetafile ze-quartz kuyahambelana. Inkqubo yokuvelisa i-quartz ilawulwa yiyo loo nto iphantse yagqibelela.
Ihlala ixesha elide -Ukubonelelwe ukuba imiphezulu yeetafile ze-quartz zikhathalelwe ngokufanelekileyo kwaye zigcinwa kakuhle, inokuhlala amashumi eminyaka. Abathengisi beQuartz kunye nabavelisi babandakanya iwaranti yeminyaka eli-10 ukuya kweli-15 yee-countertops, ngelixa ezinye zibandakanya newaranti yobomi.
Ukungafani - Imiphezulu yeetafile zeQuartz zinembonakalo yangoku kodwa inika ukungahambelani xa kufikwa ekuxubeni nasekufaneni uyilo lwekhitshi olulungeleleneyo. Ingasetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zoyilo kwaye inokutshatisa phantse nasiphi na isitayile yoyilo, nokuba inokuba yeyesiko, yotshintsho, yanamhlanje okanye yanamhlanje. Iyafumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala kwaye inikezela ngokwahluka xa kufikwa kwiipateni.
Ukuba bhetyebhetye kunye nokwenza ngokwezifiso eziphezulu -I-Quartz yenye yezona zinto zintle kakhulu ekunokukhethwa kuzo kwimarike. Kuba i-quartz yenziwe ngumntu, inokwenziwa ngokwezifiso kakhulu kwaye inokusetyenziselwa ukuvelisa nayiphi na imilo, ubungakanani okanye ifom.Iifabricators zinokugoba okanye ukujika izinto ngokulula, ngenxa yoko ii-edgings, ii-countertops ezigobileyo okanye ii-sinkholes aziyindawo ezinengxaki xa kuthelekiswa nemiphezulu yamatye endalo. Ingasikwa kubungakanani beethayile eziqhelekileyo zofakelo olulula kwaye inokusetyenziselwa zombini umgangatho kunye nokusetyenziswa kodonga.
Unokufakwa kwisiqwenga esinye - Abanye abavelisi banikezela ngokuqhubekeka ngokuqhubekayo kwee-countertops ngaphandle kokubonakala okubonakalayo. Oku kuhlala kuyinyani nakumgangatho we-quartz slabs oqhelekileyo oba nobungakanani be-60 nge-intshi ye-120. Akukho zixhobo ezibonakalayo njengoko ukongezwa kwee-resin kuvumela ukusikwa okucocekileyo.
Ungabiza kakhulu - Xa kuthelekiswa nezinye izinto zokubala ezifana nekhonkrithi, iinkuni, i-laminate, i-quartz iyabiza kakhulu, ngelixa kuthelekiswa nokukhethwa kwamatye endalo, ixabiso lentengo yeetafile ze-quartz liphantse lasondela kwi-granite. Izinto zokubala ze-DIY zihlala zihamba ngezantsi okanye malunga ne- $ 10 ngeenyawo zenyawo, kodwa i-quartz iyabiza kakhulu kwaye inokufikelela kwi-80 ukuya kwi-140 yeedola kwenyawo nganye kubandakanya ufakelo.
Imiphezulu yeetafile zeQuartz azikulungelanga ukusetyenziswa ngaphandle - iQuartz yenzelwe kuphela ukuba isetyenziswe ngaphakathi. Abanye abavelisi bayayiphelisa iwaranti ukuba ifakwe ngaphandle okanye kwindawo engatyhilelwanga.
Ukubonakaliswa kukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo kunokubangela ukonakala kwimiphezulu yeetafile zekartz -IQuartz iyabuthathaka kwimitha ye-UV, ekhokelela kutshintsho kumbala xa ivele rhoqo kubushushu belanga. Ukongeza kuloo nto, ubushushu obugqithisileyo kunye nelanga kunokubangela ukuba imiphezulu yeetafile zekartz zahlukane kwaye zijijeke ngokuhamba kwexesha.
Imiphezulu yeetafile zeQuartz azinako ukuthatha ubushushu obugqithisileyo- Imiphezulu yeetafile zeQuartz ziyabumelana ubushushu kodwa zinomda. Oku kungenxa yentlaka yeplastiki esetyenziselwa ukwenza i-quartz. Ngokwabavelisi abathile, imiphezulu yeetafile zekartz zinokufikelela kubushushu obungu-300 degrees Fahrenheit. Nangona kungenakonzakaliswa ngokulula ziipani ezishushu, ukushiya ixesha elide ngaphezulu kwekhawuntara kungakhokelela kwimingxunya engaphezulu. Ukuqiniseka nje, sebenzisa iphedi eshushu okanye itrivet ngeembiza neepani ukukhusela imiphezulu yeetafile zekartz.
Imiphezulu yeetafile zerandi zibiza iinyawo ngesikwere kunye nomndilili weendleko zemiphezulu yeetafile zekartz
Ixabiso le-quartz linokuhamba naphi na ukusuka kwi- $ 50 ukuya kwi- $ 100 ngonyawo wesikwere kwizinto ezizodwa, kuxhomekeke kuhlobo, umbala kunye noyilo. Kwi-avareji, iindleko eziphathekayo zeetafile ze-quartz zisimalunga ne-75 yeedola ngonyawo wesikwere, ngaphandle kofakelo.
Iindleko ze-quartz esemgangathweni esezantsi zinokubaleka ukusuka kwi-50 ukuya kwi-60 yeedola ngeenyawo zenyawo. I-quartz esemgangathweni ophakathi ihlala ixabisa i-60- $ 70 ngeenyawo zenyawo, ngelixa i-quartz esemgangathweni ophakamileyo ihlala ingama- $ 70- $ 100 ngeenyawo zenyawo.
Iindleko zokufaka imiphezulu yeetafile zekartz
Iindleko zokufakelwa kwee-countertops ze-quartz zingasebenza naphi na ukusuka kwi- $ 150 ukuya kwi- $ 180 ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke ekugqityweni, kwinani leeslabs kunye noyilo lokuhlela. Kwitafile yokulinganisa i-25 yeenyawo zenyawo, ixabiso lezinto kunye nokufakelwa kunokubiza umninikhaya phakathi kwe- $ 1200 ukuya kwi- $ 2700 kuyo yonke iprojekthi.
Ngaphandle kwento yomgangatho we-quartz kunye nexabiso lofakelo, ezinye izinto ezongeziweyo ezibandakanyiweyo kwiindleko zeprojekthi zizonke: uyilo lokuhlela kunye nokuyila, ukulinganisa izinto, ukudityaniswa komthungo kunye nokusikwa kwezinto ezilungiselelwe kunye nesinki. Inkxaso yemathiriyeli yetafile ihlala ingafakwanga, ke kuya kufuneka ujonge iimeko zakho zasekhitshini ezikhoyo ukuze uhlangabezane neemfuno zomthengisi. Unyango lokuhlela, kwelinye icala, ihlala ifakiwe kwixabiso lezinto ezibonakalayo, ukuba uyilo lusisiseko kwaye lusemgangathweni. Iiprofayili zomphetho okhethekileyo zihlala zibangela iindleko ezongezelelweyo.
Imiphezulu yeetafile zerandi zibiza vs igranite
I-Granite yeyona nto ithandwayo ngamatye endalo kwaye ihlala ithandwa kakhulu ngabanini bamakhaya ngenxa yobuhle bayo kunye nokuqina kwayo. I-Quartz, kwelinye icala, iphantse yafana ne-granite xa kufikwa kwintsebenzo kunye ne-aesthetics, kodwa ziyahluka xa kufikwa kulwakhiwo lwezixhobo njengoko i-quartz yenziwe ngumntu.
IQuartz ibiza kancinci kunegranite. Ixabiso le-quartz linokudibanisa i-80 ukuya kwi-140 yeedola ngonyawo wesikwere kubandakanya ufakelo. I-Granite ixabisa i-30 ukuya kwi-150 yeedola ngeenyawo, kodwa i-granite ephezulu ixabisa ngaphezulu kwaye inokufikelela kwi- $ 175 ngeenyawo zenyawo.
Ke, ixabiso eliphakathi legranite efakiweyo yi- $ 60 ngonyawo wesikwere, xa kuthelekiswa ne-quartz efakiweyo enokufikelela kwi- $ 75.
Ziziphi izinto ezichaphazela iindleko zeetafile ze-quartz?
Zininzi izinto ezichaphazela indleko zeetafile ze-quartz:
Ibakala le-quartz -I-Quartz iza nemibala eyahlukeneyo, uyilo kunye nesitayile. Nangona uphawu ngalunye lunoluhlu oluthile kwiitafile ze-quartz, zinokuhlelwa ngokubanzi njengomgangatho, ipremiyamu okanye umyili. I-quartz esemgangathweni oqhelekileyo ihlala icacile kwaye iza ngombala oqinileyo. I-premium kunye ne-quartz yoyilo zizinto ezizodwa ezinemilinganiselo etyebileyo kunye nombala. Abanye abathengisi banikezela nge-quartz ngexabiso eliphantsi ukuba uyilo lwabo luyekile.
Uhlobo lweprojekthi- Uhlobo lweprojekthi lukwachaphazela iindleko zemiphezulu yeetafile ze-quartz kuba ibeka ubunzima bokuthambeka kweetafile ze-quartz. Ubeko lwekhitshi olulula oluwela phantsi kobungakanani beesilesi ze-quartz eziqhelekileyo ziya kufuna isilayidi esinye se-quartz ngaphandle kwemixube, yiyo loo nto kulula ukuyifaka. Imiphezulu yeetafile zeQuartz ezinamacandelo amaninzi zinzima ngakumbi ukufaka. Imiphezulu yeetafile enezitena ezininzi, ukusikwa kwezinto ezilungiselelwe oko kunye nemiphetho yeekhethelo nako kuyabiza.
Uhlobo kunye nomthombo wemathiriyeli -Iitafile zeQuartz zineempawu ezahlukeneyo kunye nabavelisi. Ngelixa umgangatho abawunikelayo ufana, amaxabiso abo ahlukile. Ezinye iimveliso zijongwa njengokuphela okuphezulu kunezinye.
Ufakelo - DIY okanye ukuqesha ingcali? Uhlobo lofakelo olufunayo kwi-countertop yekhitshi luxhomekeke kubume beprojekthi. Imiphezulu yeetafile zasekhitshini ezisebenzisa i-quartz slabs enye inokwenziwa njengeprojekti ye-DIY kusetyenziswa imiphezulu yeetafile zokwenza i-quartz, ngaloo ndlela kugcinwa iindleko ngokwasemsebenzini. Nangona kunjalo ukufakwa kwe-DIY kuyacetyiswa kuphela ukuba unamava kwaye unamava. Ukufakwa kobuchwephesha kuya kuthatha malunga ne-30% ukuya kwi-50% yexabiso leprojekthi iyonke, kuxhomekeka kwezinye izinto.
Ukuthenga phi imiphezulu yeetafile zekartz?
I-Quartz ihlala ifumaneka kwiivenkile ezininzi zokuphucula ikhaya kunye nokuyilwa kweekhitshi okanye abathengisi bamatye abakhethekileyo. Ngokufanelekileyo, jonga ivenkile evelisa izinto, ephatha ukusika, ukujija, ubuqhetseba, ukugqiba, uyilo kunye nofakelo. Ukuthenga imiphezulu yeetafile ze-quartz kubanikezeli abathembekileyo kuya kuqinisekisa ukuba ufumana olona hlobo lubalaseleyo lwezinto kwaye ufakelo luphathwa ngononophelo ziingcali ezinesakhono.
Abathengisi betafile yeQuartz bahlala benikezela abathengi babo isampulu encinci yezinto eziphathekayo ukuze ufumane umbono wombala kunye nephethini yequartz. Unokusebenzisa isampulu yezinto ezibonakalayo ukubona ukuba isithethi sakho se-quartz sihambelana nombala weekhabhathi zakho esele zikhona. Nangona kunjalo, kungcono ukubona i-slab yangempela ye-quartz ngaphambi kokuthenga.
Esinye sezibonelelo eziphambili ezinokubonelelwa ziipakethi ze-quartz kukwahluka kwemibala, iipateni kunye nokugqitywa okunokubonelela. I-Quartz, ukuba luhlobo lwethoni yobunjineli, iza uluhlu lwemibala eveliswa ngokongeza ii-pigment kwi-resin kunye nomxube we-quartz olungumgubo. Uninzi lwemibala ye-quartz ivela kumbala wendalo we-quartz kodwa ngokudibanisa imibala kunye neebala, iithoni kunye ne-shades zinokuhlengahlengiswa.
Ithuba lokwenza imibala ngemibala ivumela abavelisi ukuba baphuhlise owabo umgca ohlukileyo weetafile zekartz. Kwaye olu luhlu luqhubeka ngokuqhubekayo njengoko iimveliso zizama ukunika iinketho ezintsha nezintsha kubanini bamakhaya banamhlanje.
Olunye uphawu olubalulekileyo lwemibala ye-quartz kukuba iyahambelana ngakumbi xa ithelekiswa nelitye lendalo. Ilitye lendalo elifana negranite lifunyenwe kwi-slabs kwaye nganye yeeslabs yahlukile. Ibhetshi nganye inombala owahlukileyo, ngaloo ndlela ukuthelekisa ngamanye amaxesha kunokuba nzima kakhulu njengoko umphezulu unokubonisa umahluko omncinci kumbala. Ukufana kunye nokuhambelana kwemibala ye-quartz ikwavumela abanini khaya kunye nabaqulunqi ukuba bazame kwizicelo ezahlukeneyo zoyilo.
I-Quartz iza nemibala ebanzi, kodwa le mibala inamagama ahlukeneyo ngokuxhomekeke kumthengisi. Imibala yeetafile ze-quartz zixhomekeke kwimibala yendalo kunye neetoni zomhlaba ezinje ngombala, browns, tans kunye nohlaza. Ukungathathi hlangothi njengabamhlophe abaqaqambileyo, ama-beige akhrimu kunye nabamnyama zezinye zeendlela ezithandwayo. Ikwafumaneka kwii-hues ezifihlakeleyo kunye nee-pastels ezinje ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye i-rose, ukuya kwizityebi ezimnyama ezinje ngombala obomvu, oluhlaza, igolide okanye ubhedu. Olunye uphawu lubonelela ngemibala eqaqambileyo kunye nesibindi ehambelana nokuseta okwangoku.
Nantsi imibala eyaziwayo ye-quartz esekwe kwiimveliso zabo:
I-White yenye yeyona mibala ye-countertop ethandwa kakhulu. Njengazo naziphi na izinto ezinamatye endalo, imiphezulu yeetafile zekartz ezimhlophe ziguquguquka kakhulu kwaye ziyaguquguquka xa kufikwa kusetyenziso loyilo. Ukuthathelwa ingqalelo njengombala wobungqina osilelayo, imiphezulu yeetafile ezimhlophe ze-quartz zihamba kakuhle nazo zonke iindlela zoyilo, nokuba inokuba yeyesiko, iklasikhi, inguqu, okwangoku okanye yanamhlanje.
Ngokungafaniyo nokukhethwa kwamatye endalo apho izinto ezimhlophe ezimsulwa kunzima ukufikelela kuzo, imiphezulu yeetafile zekartz ziyafumaneka kwithafa, umbala omhlophe oqinileyo. I-quartz emhlophe ikwafumaneka kwiithoni ezahlukeneyo ezivela kwelona mhlophe liqaqambileyo ukuya kwiitoni ezimhlophe. Iipateni ze-quartz emhlophe nayo yahlukile, ezinye ziqulathe ukuthamba kwiipateni zokuthambisa ezimangalisayo, ngelixa ezinye izinto ezenziwayo zinemikhonto emihle okanye isinyithi seeminerali. Oku kwahluka kwepateni kunye nokuthungwa kuvumela abaninimzi ukuba benze umdla onomdla ngakumbi kuyo yonke iphalethi emhlophe ekhitshini labo.
Xa isetyenziselwa imiphezulu yeetafile yasekhitshini, iquartz emhlophe inika ukubonakala okukhanyayo kunye nokuqaqambileyo okwenza ukuba izithuba zibonakale zinomoya ngakumbi, zicocekile kwaye zibanzi. Kukhetho oluqhelekileyo olongeza ubuhle kunye nobunkunkqele kuseto lwekhitshi obutofotofo.
Xa usebenzisa imiphezulu yeetafile ze-quartz ezimhlophe kunye neekhabhathi ezimhlophe, qiniseka ukuba ukhetha into ene-veining okanye i-flecks ukuze wophule i-monotony yendawo. Nangona kunjalo, usengaya ngetafile emhlophe eqinileyo ye-quartz ukuba ujonge ukungabi nasiphako, ukuhlengahlengisa, ukujonga okuncinci.
Imiphezulu yeetafile ze-quartz ezimhlophe kunye nezinye i-quartz ezinemibala ekhanyayo ziyacetyiswa ukuba zisetyenziswe kwiikhitshi ezincinci njengoko zihlala zithatha indawo yokucinga kunye nendawo evulekileyo ngakumbi. Imiphezulu yeetafile ze-quartz ezimhlophe zikwajongeka zibetha ngakumbi xa zidityaniswe nekhabhathi enombala omnyama. Ngenye indlela, inokusetyenziswa kunye neminye imibala yekhabhathi ukufezekisa umahluko ocacileyo.
Ngakumbi imiphezulu yeetafile zwi ezimhlophe imifanekiso kunye nemibono jonga iphepha lethu legalari.
Nayi eminye imizekelo yequartz emhlophe:
IMontblanc - ijongeka njengemabhile, inemibala emhlophe enemibala emhlophe
I-Attica emhlophe-inesiseko esimhlophe esinemithambo engwevu encinci
Alpine Mist - ijongeka njengemabhile, isiseko esimhlophe ngemithambo ye-beige
Ikhonkrithi entsha - ilingisa ukubonakala okumhlophe okuhle Umgangatho wekhonkrithi ngamachaphaza amhlophe ashushu
Umhlophe omsulwa - unombala oqinileyo, ngokukaCesarestone ngowona ucocekileyo, ococekileyo, omhlophe kakhulu
Umhlophe omhlophe-ubonakalisa isiseko esimhlophe esimhlophe esinentsimbi kunye neqabaka
I-Yukon Blanco-ibonisa ukubonakala okumhlophe okucacileyo, eqaqambileyo kunye ne-quartz emhlophe eqaqambileyo
I-Annicca- ifana nemabhile yendalo, inesiseko esimhlophe esimhlophe esinemithambo engwevu
Imiphezulu yeetafile ze-Beige quartz zezona zilungileyo xa zithelekiswa nemiphezulu yeetafile zekartz ezimhlophe. Ukuba ufumanisa i-quartz emhlophe icace gca okanye buthuntu, ungahamba nge-beige njengoko ine-tinge etyheli evelisa ibhalansi efanelekileyo ye-undertones epholileyo nefudumeleyo. I-quartz ye-Beige ikwahluka xa kufikwa kusicelo loyilo njengoko ikwangumbala ongathathi hlangothi.
Nangona inokusetyenziselwa uyilo lwesiqhelo kunye nolwanamhlanje, imiphezulu yeetafile ze-beige zilungele ngakumbi useto oluphefumlelweyo lwakudala. Zama ukudibanisa imiphezulu yeetafile ze-quartz ze-quartz kunye nekhabhathi yeplanga okanye iikhabhathi ezixinezelekileyo ngobuhle bendabuko kunye nobuhle.
Nayi eminye imizekelo ye-quartz ye-beige:
I-Creme Brule- inesiseko esicocekileyo se-beige kunye ne-tan eshushu efudumeleyo kunye neeminerali eziqaqambileyo
UFrosty Carrina - isiseko se-beige esicocekileyo esinemithambo ethambileyo efihlakeleyo
ICapri Limestone - umbala oqinileyo ococekileyo we-beige
I-Lusso-ilingisa ukubonakala kwemarble, isiseko sombala cream kunye nemithambo ethambileyo engwevu
I-Tigris Sand - isiseko sombala we-beige kunye nokukhanya okukhanyayo okumhlophe kakhulu
I-Kelvingrove-inembonakalo engaqhelekanga, i-beige ethambileyo kwisiseko se-taupe esikhanyayo kunye ne-taupe epholileyo kunye nemithambo epholileyo eblue grey
I-quartz emnyama inikezela ukubonakala okumangalisayo kwaye inika ubunzulu obongeziweyo kunye nobukhulu kwisithuba. Xa kuthelekiswa nemibala ekhanyayo, i-quartz emnyama ibonakala ngakumbi kwisithuba kwaye yenza ingxelo eqinileyo. Olunye uncedo lokusebenzisa imiphezulu yeetafile ze-quartz emnyama kukuba ihlala ifihla ubumdaka ngokuthelekiswa nemiphezulu yemibala ekhanyayo.
Imiphezulu yeetafile ze-quartz ezimnyama zilungele ngakumbi iikhitshi zangoku ezinekhabhinethi emhlophe. Ukudibanisa okuqhelekileyo yenye yeekhabhathi ezingapheliyo kunye nokudityaniswa kombala wecomputer okuqinisekisa ukuba awusoze waphuma kwisitayile. Kwakhona, ubuhle beetafile ze-quartz ezimnyama kukuba uninzi lweemveliso zinikezela uyilo olunefuthe lokuqaqamba elikhethekileyo elibangelwa yimikhanyiso ekhanyayo ebonakala imangalisa ngakumbi phantsi kwesibane. Imiphezulu yeetafile ze-quartz zikwakhangeleka zintle kwaye zinesitayile xa zisetyenziselwa iikhitshi.
Nayi eminye imizekelo yequartz emnyama:
IVanilla noir- quartz ejongeka njengeemabhile, isiseko esimnyama esinemithambo emhlophe emangazayo
IJet emnyama - umbala omnyama oqinileyo kunye namalahle afihlakeleyo, agqibelele kwiikhikhini zala maxesha
IMarquina - imvelaphi emnyama kunye nemithambo emhlophe emikhulu
Umnyama omnyama-umbala omeleleyo we-quartz kwi-jet emnyama emnyama
ICambria emnyama - inesiseko esimnyama samalahle esinamaqhubu amnyama aphakathi kunye namachaphaza amhlophe amhlophe
Kuthathelwa ingqalelo njengendawo entsha yokungathathi hlangothi kwimeko yoyilo lwangoku lwasekhitshini, imiphezulu yeetafile ezingwevu, nokuba yigartz okanye ilitye lendalo lithandwa kakhulu ngenxa yamandla athe cwaka abolekisa ngawo. Ngomthunzi ofanelekileyo, i-grey idala umphumo omkhulu ongenakunzima.
Imiphezulu yeetafile ze-quartz ezingwevu zixhaphake kakhulu njengoko zinokudityaniswa kunye nekhabhathi enombala okhanyayo kunye nomnyama. Ukuba awukuthandi ukuthamba kwe-beige kunye nokuqaqamba okumhlophe, imiphezulu yeetafile zekartz ezingwevu zinokuba yindawo efanelekileyo yokudala umahluko phakathi kwekhabhathi emnyama, ngelixa ukhangela ikhomputha ye-quartz egqibeleleyo yokuncedisa iinkuni ezikhanyayo, imiphezulu yeetafile zekartz ezimhlophe lukhetho olunye onokulujonga. Imiphezulu yeetafile ze-quartz ezingwevu zinokusetyenziselwa ukuphucula umbala wekhabhathi yokhuni oluqinileyo ngokwendalo ngokuqaqambisa iphantsi kwayo.
Nayi eminye imizekelo yequartz engwevu:
Ikhonkrithi erugged okanye eSleek- ifana nesilayidi yendalo ekhonkrithi
I-Piatra Grey - ifana nemabhile emhlophe enemithambo emhlophe
I-Turbine grey-ibonisa isiseko esimdaka esipholileyo ngemithambo ejikelezayo emhlophe, ngwevu efudumeleyo nangwevu okhanyayo
I-ink-granite efana ne-quartz enesiseko esingwevu esinyanzeliswa ngamachaphaza amalahle afudumeleyo kunye neenkozo ezintle ezimhlophe
ICarrick- inomzimba ongwevu ophakathi kunye nemithambo ethambileyo ejikelezayo engwevu ephakathi
UKumkanikazi u-Anne-unemabula enjengembonakalo epholile ngwevu enemithambo emhlophe ethambileyo
I-quartz enemibala yomhlaba ibandakanya inani lee-shades ezahlukileyo, iitani, i-browns, isanti ukuya kwigolide, tyheli kunye nobusi. Imfucumfucu yegolide ebomvu kunye negolide yokufudumala eyenza ikhitshi imeme ngakumbi, ifana nasekhaya kwaye yamkele. I-quartz yeBrown nayo ijongeka ngakumbi kwendalo, kwaye ikwabolekisa ikhitshi ngakumbi xa idityaniswe nekhabhathi yokhuni.
I-quartz e-brown kunye negolide yeyona ukubheja kwakho kubhetele ukuba ufuna ukwenza iskimu sombala we-monochromatic ekhitshini lakho. Ukusebenzisa umthunzi ofanayo wekhabhinethi kunye ne-countertop kuvelisa uyilo oluboshwe ngokudibeneyo. I-quartz e-brown igcwalisa umbala wemvelo wemithi, ngelixa i-quartz yegolide inceda ekuphuculeni amandla ayo aphantsi.
I-quartz e-brown kunye negolide yeyona mibala ifanelekileyo yokujonga iikhowudi zekhitshi zakudala. Igcwalisa isitayile se-rustic, ilizwe eliphefumlelweyo kunye neekhitshi zangoku.
Nayi eminye imizekelo yeetoni zomhlaba zetartz:
Ukusa kwaseTuscan - kubonisa isiseko se-taupe ngokukhanya okukhanyayo, okunemithambo emhlophe emhlophe
Ilayisi yasendle- ijongeka njengegranite yendalo, isiseko esimdaka esiphakathi kunye namalahle kunye nemithambo emhlophe ethambileyo
ICoral Clay - inemvelaphi yetaupe enamachaphaza amhlophe amhlophe kunye nokukhanya okungwevu okukhanyayo
IKona Beige neMeditera- luhlobo lwegranite enje ngequartz, isiseko sombala wentlabathi kunye nokuhamba okumnyama okumdaka, beige kunye taupe undertones
I-Toffee -i-quartz enemibala eqinileyo kumbala we-taupe, egqibeleleyo kuseto lwangoku
ISienna Ridge -uhlobo lwegranite efana ne-quartz enesiseko esimdaka ngombala esibonakaliswe ngamabala amhlophe namnyama
USanta Fe Brown - i-quartz enemibala eqinileyo kwitani enomhlaba ocacileyo
I-Brescon Brown - luhlobo lwegranite efana ne-quartz enesiseko esimibala entlabathi egxunyekwe ngeetoni zangaphantsi kunye namaminerali amachaphaza amhlophe ngekhephu kunye nemibala emnyama
I-Cambrian Gold-luhlobo lwegranite efana ne-quartz enesiseko esinombala wobusi esinemigodi yegolide
INew Brighton - iyafana nembonakalo yemarble emdaka enemithambo emhlophe
Imiphezulu yeetafile ze-quartz ezibomvu, eziluhlaza okwesibhakabhaka kunye noluhlaza aziqhelekanga ekhitshini, kodwa le mibala ikhethekileyo inokuguqula ikhitshi lakho libe yingxelo ebethayo kwangoko. Le mibala ithambekele ekwenzeni iindawo zasekhitshini zibenempilo ngakumbi kwaye zibonelele ngombala onomdla kwindawo. Ngokwesiqhelo, le mibala ithe tyaba ye-quartz isetyenziselwa useto lwala maxesha, ngelixa iinguqulelo ezinzulu kunye nezimnyama ngamanye amaxesha zisetyenziselwa iikhitshi zesiko ezityebileyo. Ngokufanelekileyo, i-quartz enemibala engaqhelekanga kufuneka ibhangqwe kunye neekhabhathi ezinemibala ekhanyayo ukuze zingakhuphisani nezinye kwindawo.
Nayi eminye imizekelo yequartz eluhlaza, eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nobomvu:
I-Shimmer ebomvu-ibonisa isiseko esibomvu esibomvu kunye neentsimbi ezikhanyayo zesilivere kunye nomhlophe
I-Blue Agate-inepateni ekhangeleka ngokukodwa ejongeka njenge-mosaic, uhlobo lweprimiyamu ye-quartz eneblue blues, turquoise, pearl nesafire.
Ulwandle lweStellar - iquartz eluhlaza okwesibhakabhaka
U-Eros Stellar - i-quartz ebomvu
Ukuzonwabisa okuluhlaza- iapile eluhlaza quartz
IBlue Blue - inegranite efana nembonakalo ebonisa umbala ohlaza okwesibhakabhaka ocacileyo kunye namachaphaza
I-Bristol Blue -izinto ezinombala oluhlaza okwesibhakabhaka ezinzulwini zobusuku ezinepateni ehlukileyo yesilivere kunye nemhlophe emhlophe efana nobusuku obuneenkwenkwezi
I-Cardigan ebomvu-ine-granite efana nembonakalo ebomvu ngombala ngombala wentsimbi
Iipateni ze-Quartz countertops
Ngaphandle koluhlu olubanzi lwemibala, imiphezulu yeetafile ze-quartz zikwakhona kwiipateni ezahlukeneyo ezilinganisa ukubonakala kwamatye endalo njengeemabhile kunye negranite. Ezinye iitafile ze-quartz zikwabonakala ngathi yisamente okanye ikhonkrithi. Kuxhomekeka ekubeni yaveliswa njani, imiphezulu yeetafile zekartz zinokuba nemithambo, ukubhabha okanye umbala oqinileyo. I-quartz yomhlaba ecekeceke ibonisa ubume obugudileyo kunye nembonakalo, ngelixa i-quartz esemhlabeni erhabaxa inenkangeleko ephaphazelayo.
Ukukhetha iphethini ye-quartz yakho kuya kuxhomekeka kakhulu kubuhle obunomdla bokuma ekhitshini lakho. Unokuhamba ngemithambo efihlakeleyo kunye nokuthamba okuthambileyo ukuba ufuna imiphezulu yeetafile zekartz zidityaniswe ngokuvumelanayo kumbala wombala wekhitshi lakho. Kodwa ukuba ufuna ukuma kwaye usebenze njengendawo egxile ekhitshini lakho, khetha ii-countertops ze-quartz ezineepateni ezimangalisayo nezingaqhelekanga. Kwakhona, khetha uyilo lwekhabhathi olula oza kuhamba nalo ukuqinisekisa ukuba ezi zinto zimbini azikhuphisani.
Imiphezulu yeetafile ze-quartz esele zenziwe zilungile kwaye zenziwe zangaphezulu zigqiba imiphetho. Ezi slabs zigqityiweyo zikulungele ukufakwa, xa kuthelekiswa nemiphezulu yeetafile yesiko kusafuneka yenze imveliso.
Abanye abantu bacinga ukuba i-quartz slabs esele ikhethwe ikumgangatho ophantsi kodwa oku akuyonyani.
Izinto ezifanayo ezisetyenziswa kwiiprojekthi ezisikiweyo zesiko ikwayile quartz isetyenziswayo kwiitafile ezisetyenzisiweyo. Ngendlela efanayo neyenziwe ngaphambili imiphezulu yeetafile zegranite zenziwe ngegranite yokwenyani kunye nemacwecwe emarmore emiselweyo yenziwe ngemabula yokwenyani. Ayichaphazeli umgangatho wemathiriyeli kwaphela. Ufumana indawo efanayo yomelele, enzima, kodwa yenza mfutshane ixesha lokulinda kwimveliso kunye nokuqanjwa kwesiko.
Imiphezulu yeetafile eyenziweyo ngokwesiqhelo iza nexesha elikhokelayo-elithetha ukuba kuya kufuneka ulinde iiveki ukuze ufumane iitafile zakho kuba kusafuneka zihambile kwimveliso, zisika ngokokucaciswa, ukujikeleza kunye nokugqiba. Imiphezulu yeetafile zekartz ezenziwe kwangaphambili. Uninzi lwabathengisi banalo esitokweni kwaye banokuhanjiswa ngexesha elifutshane xa be-odolwe.
Abavelisi beQuartz banika imiphezulu yeetafile ekhethiweyo enokutshintshwa ngexesha lofakelo. Oku kuthetha ukuba i-quartz slab iza ngobukhulu obuqhelekileyo kumbala othile kunye nephethini kwaye isikwe ngokobungakanani obufunekayo kwindawo yomsebenzi kwaye ilungiselelwe ufakelo.
Ngokungafaniyo neetafile ze-quartz zesiko apho umnini-khaya okanye abathengi banokhetho lokongeza kunye nokuphelisa, ukugqiba ngaphambi kokuveliswa, iizilayiti ze-quartz esele zenziwe zifumaneka kuphela kwimibala ethile okanye kugqityiwe kwaye zihlala ziza kuyilo olunqamlezileyo. Ngokwesiqhelo, ii-quartz ezenziwe kwangaphambili ziyafumaneka kwiindidi ezahlukeneyo zokuhlela ezibandakanya umda wokunciphisa, umda we-bullnose, umda we-mitered kunye ne-bullnose. Xa kuziwa kwimibala, i-quartz ye-prefab inikeza uluhlu olubanzi lokukhetha kunye noyilo.
Ubungakanani obuqhelekileyo beetafile ze-quartz ezikhethiweyo zii-intshi ezingama-108 x 26 intshi x 2 iisentimitha okanye ii-intshi ezingama-108 x 26 intshi x 3 centimeters. Abanye abathengisi bayinikela ngee-intshi ezili-110 x 25.5 intshi x ¾ intshi ubukhulu kwiikhawuntari, 110 intshi x 36 intshi x ¾ intshi ubukhulu, okanye 110 intshi x 42 intshi x ¾ intshi ubukhulu, okanye 110 intshi x 52 intshi x ¾ intshi ubukhulu iziqithi kunye nee-intshi ezingama-110 x 4 intshi x ¾ intshi ubukhulu okanye i-intshi ezili-110 x 7 intshi x ¾ intshi ubukhulu kwi-backsplashes. Abanye abavelisi banikezela imiphezulu yeetafile ze-quartz ezenziwe ngokobungakanani obuqhelekileyo: 2 iisentimitha zokubala kunye neesentimitha ezi-3 zokubala.
Imiphezulu yeetafile ze-quartz ezikhethiweyo zilungile kubathengi abanee-countertops zekhitshi eziwela kubungakanani obuqhelekileyo. Iyanciphisa iindleko zomsebenzi kwaye inciphise ixesha lofakelo. Ixabiso eliphakathi lee-counters zenziwe nge-quartz kubandakanya ukufakwa kwe- $ 30 ukuya kwi-50 yeenyawo ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke kubukhulu, umbala, uyilo kunye nophawu lwento.
Imiphezulu yeetafile zeQuartz zihlala zibizwa ngokuba ziitafile zamatye ezakhiwe ngobunjineli, imiphezulu yeetafile eyakhiwe ngamatye okanye imiphezulu yeetafile ye-quartz ngenxa yokuba zenziwe ngomxube we-silicone dioxide yendalo ingumxube wezinto zokwenziwa ezinjengee-resin binders kunye nee-pigment.
Imiphezulu yeetafile zeQuartz zihlala zididekile neQuartzite, uhlobo lwento eyakhiwe ngamatye endalo, yiyo loo nto abanye abavelisi behlala bebhekisa kwi-quartz njenge-quartz eyenzelwe ukuthintela ukudideka. Umahluko ophambili phakathi kweetafile ze-quartz zobunjineli kunye neetafile ze-quartzite kukuba le yokugqibela yindlela yelitye le-metamorphic elenziwe xa ilitye lesanti liphantsi koxinzelelo nobushushu obukhulu. I-Quartzite ikwafumaneka ngokubanzi ngombala omhlophe ukuya kumbala ongwevu onepinki nebomvu evela kwii-oxides zentsimbi elityeni. Kwelinye icala, imiphezulu yeetafile ze-quartz zobunjineli, zinokukhetha imibala eyahlukeneyo.
I-Countertop edgings yenza okungaphezulu nje kokuphucula i-aesthetics yamabala ekhitshi. Ubume bemiphetho ye-countertop yakho ineenzuzo zokusebenza ezinokuchaphazela ukhuseleko kunye nokugcinwa. Kwaye ekubeni imiphezulu yeetafile zezona ndawo zisetyenzisiweyo zeendawo zekhitshi, ubume bayo kunye nemiphetho yinto. Nokuba iinkcukacha zincinci ekhitshini zibala ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle komsebenzi, ukwandisa ukusebenza kunye nokwenza uyilo olulungeleleneyo loyilo.
Iprofayili yokuhlela okanye unyango olujikelezayo luhlobo lokuphela kwekhitshi yokupheka ekhitshini. Kukho iiprofayili zokuhlela ezininzi kwiitafile kwaye oku kunokusetyenziswa kwilitye lendalo kunye nomphezulu wamatye kunye nezinto zokwakha. Unyango olusisiseko lwe-edge lunokwenziwa kwi-2 cm ye-cm kunye ne-3 cm ye-slabs. Nangona kunjalo kuyilo oluhombise ngakumbi, abavelisi beetafile zekartz baya kufuna islabha esityebileyo kungenjalo iprofayile ayizukubonisa. Ukuphuculwa komda kubiza ngaphezulu kwaye kongeza malunga ne- $ 20 ukuya kwi-36 yeenyawo ngonyawo olufanayo kwiindleko zakho zempahla. Oku ikakhulu kungenxa yokuba kunzima ngakumbi ukuzenza kwaye kufuna ixesha elininzi lokucoca. I-edgings esemgangathweni enje nge-eased edge, umda we-bullnose kunye nomda we-bevel zihlala ziza neendleko zokufaka.
Ngaphandle kwemiphetho ye-countertop eyisiseko, omnye umenzi unikezela iipateni zokutyikitya kunye nokunyanga okukhethekileyo ukuvelisa i-countertop design. Ezi profayili zisecaleni zinzima kwaye zinobunkunkqele kodwa zinokongeza kwiindleko zezinto zakho.
Njengoko kukhankanyiwe, ii-countertop edgings zibalulekile ngokokhuseleko. I-countertop yesikwere ngokupheleleyo okanye i-countertop eneemphetho ezibukhali ingaba yingozi. Kubeka umngcipheko wabantwana abancinci abangqubeka iintloko zabo kwiikhawuntari okanye umsebenzisi abetheka esinqeni kwiikona. Abenzi be-Countertop baya kubonelela ngecala elincinci okanye i-kerf kumacandelo e-countertop ukunciphisa umngcipheko. Nokuba umninikhaya ukhetha iprofayili yesikwere ngokwenyani, abavelisi basaya kuzama ukucokisa iimbombo kancinci kungekuphela kukhuseleko lwezokhuseleko kodwa nokunciphisa ukusikwa nokophuka ngokunjalo.
Nayi eminye imizekelo eyahlukeneyo yonyango olusisiseko lomphezulu weetafile ze-quartz kunye nokwahluka kwazo:
Ukunciphisa okanye umgca ochanekileyo -Ukwabizwa ngokuba ngumda othe tyaba kunye nomda othe nkqo, umda olula lolona hlobo lusisiseko lomda olunika i-countertop isiphelo esigudileyo. Iprofayile isikwere kodwa incinci kakhulu kunciphiswe umphetho ophezulu nje ngokwaneleyo wokuphelisa iikona ezibukhali. Umda okhululekileyo ubonakalisa ubukhulu bezinto zonke. Lo ngumgangatho oqhelekileyo ukuba abavelisi banike ii-quartz countertops kwaye ngokuqhelekileyo abanakho iindleko ezongezelelweyo ezichaphazelekayo. Olu hlobo lweprofayile yomda lolona lulula kodwa lusebenza kakuhle nakweyiphi na indlela yoyilo loyilo, ngakumbi useto lwangoku kunye nolwanamhlanje oluhambelana nokujongeka okungaphezulu kunye nokuhlengahlengiswayo.
Umda we-Beveled -Umda wentsimbi ubonakala nge-45 degrees cut in the edge of the countertop material. Ubunzulu bokunqunyulwa kwezinto zokubala ze-bevel zinokulungiswa kwaye zihlengahlengiswe ngokusekwe kukukhetha kwabanini bamakhaya ukuze kugqitywe iphethini ngamandla okanye ukubonisa ipateni yelitye ngakumbi. Olu hlobo lonyango olusecaleni lunokwahluka okwahlukileyo ngokobungakanani - inokuba sisiqingatha sentsimbi yentsimbi, umda we-intshi weveveled okanye intsimbi epheleleyo ye-intshi. Isiqingatha se-intshi esijikeleziweyo luhlobo lwe-angular edging kodwa sinikezela ngenkangeleko ecekeceke ngakumbi. I-intshi ye-intshi beveled edge ine-cut cut enzulu kancinci kune-intshi ye-intshi. Ukujonga i-ift emacaleni, i-intshi ye-intshi inebala elide okanye isiqingatha esingaphezulu kunye nokunyuka okufutshane okanye isiqingatha esisezantsi. I-intshi epheleleyo ye-intshi yandisa ixesha elide ukwenza i-intshi enye eyi-45 degree cut. Olu hlobo lonyango olusecaleni ludibanisa zombini imigca eyomeleleyo kunye nentshukumo entle yokuvelisa uyilo oluhle lweetheyitile.
Umda wentsimbi ophindwe kabini -Umda wentsimbi ophindwe kabini kukwahluka kobubanzi bevel. Endaweni yokuba usikwe umphezulu womhlaba omnye, zombini indawo ephezulu kunye nezantsi kwimiphetho ziphathwa nge-degree encinci ye-angle engama-45. Oku kunika umbandela ukuba ube ngumlinganiswa owongezelelweyo xa kuthelekiswa nomda ophindwe kabini.
Umda ophindwe kabini - Umda weradiyo ophindwe kabini uphantse wafana nomda osikiweyo ongenabunzima, kodwa uneprofayile egobileyo ebonakalayo emaphethelweni. Ukujonga ecaleni, olu hlobo lweprofayili yomda luthatha ifom yesikwere ejikelezileyo. Olu luyilo lulula, luncinci kwaye lusebenza kakhulu kwiindlela ezininzi zekhitshi.
Umda weBullnose -Umda we-bullnose unika i-countertop imiphetho ejikelezileyo kunye egudileyo. Le yenye yeeprofayili zokuhlela ezaziwa kakhulu ezisetyenzisiweyo kwaye ithathwa njengeklasikhi kwindawo yoyilo ekhitshini. Olu lolunye uhlobo loyilo olusisiseko lokuhlela kwaye luthathwa njengenye indlela kwabo bafumanisa imiphetho ethe tyaba okanye eyolulweyo ngokuthe tye, ngokusesikweni okanye ngokuqinileyo. Njengomphetho okhululekileyo, imiphetho ye-bullnose ibonisa ubukhulu bezinto zonke. Olu hlobo lwephrofayili esecaleni lokuphamba ingasetyenziselwa uninzi lwezitayile zoyilo lwekhitshi, nokuba yeyesiko, yotshintsho okanye yangoku.
Isiqingatha senkunzi yenkomo - Eyaziwa nangokuthi ngumda we-demi bullnose, isiqingatha se-bullnose emaphethelweni sibonisa isiqingatha sesangqa okanye isiqingatha sesangqa. Inxalenye ephezulu yezinto ezijikeleziweyo kwaye igcwele ezantsi. Olu phawu lonyango lubonisa kwaye lubonisa ilitye ngakumbi ngemigca egobile. Ungalusebenzisa olu hlobo lonyango lwe-edge ukuba ufuna ukubonisa ubukhulu belitye lakho.
Umtya wenkomo wentsimbi - Umda we-bevel bullnose yindibaniselwano yomphetho we-beveled kunye nomphetho we-bullnose ukuze iprofayili yayo ithathe i-45 degree cut cut edge. Ithambeka elincinci elisezantsi libonisa icandelo lelitye. Oku kongeza nje into entle kumda oqhelekileyo we-bevelled. Umda we-bevel bullnose unokusetyenziselwa uyilo lwekhitshi lwangoku kunye noludala.
Umda we-ogee - Umphetho we-ogee ubonakalisa i-arch concave eguqukayo iye kwi-arveve arch, ke ngoko ithatha ubume boonobumba S. Le S incinci imile isikwe ngaphambili kwelitye, kodwa ezantsi zinomphetho othe tye, tyaba. Olu hlobo lweprofayili esecaleni lufezekile ukuba ufuna ukongeza ubuqaqawuli beklasikhi kunye nokuhonjiswa okunobunkunkqele kwii-countertops zakho. Iigophe ezimangalisayo zomphetho we-ogee zikulungele kakhulu ukufakwa kwikhabhathi okanye kwiikhabhathi ezicacileyo.
Ogee kabini - Umda we-ogee kabini ubonakalisa iprofayili yomda we-bullnose kodwa ngaphezulu kwenxalenye yegophe kukuhombisa ngaphakathi. Le yenye yezona ntlobo zintsonkothileyo zonyango lwee-countertop kwaye isebenza kakuhle kwiiklasikhi eziphefumlelweyo nezendabuko ezinokubukeka okutyebileyo, okuhle kunye nokubonakalayo.
I-Ogee Bullnose Umda - Umda we-ogee bullnose udibanisa isiqingatha esiphezulu se-ogee esiguquka sibe yi-bullnose. Iphawuleka yiprofayili ebalaseleyo ye-S kodwa yande kancinci. Ngokuyimfuneko, yinguqulelo eyandisiweyo ngakumbi yomda we-ogee. Oku kukwahombisa kakhulu kwaye kuhlotshisiwe, kugqibelele kwizitayile zasekhitshini eziphefumlelweyo zakudala. Bhangqa olu hlobo lokujikeleza kunye neetafile ze-quartz ezineepatheni zokugcoba okanye ezibukeka njengeemabhile ukwenza ukubukeka okunethezeka kwekhitshi lakho.
Ukuhamba kwinqanaba lesiqingatha se-bullnose - Isiqingatha se-bullnose esinqumlekileyo sinomqolo ophakanyiswe kancinci obekwe ngaphezulu kweprofayili yeenkomo rhoqo. Olu hlobo lweprofayile esecaleni longeza umdla ngakumbi kuyilo lwekhawuntari yakho ngokuthelekiswa nomgangatho oqhelekileyo we-bullnose. Ikwabonisa ubungakanani obupheleleyo belitye lakho kodwa yongeza umlinganiswa omncinci.
Umda wepensile kathathu - Iprofayile yomda wepensile kathathu yenye yeentlobo zokuhombisa ezihombisayo. Inamanqanaba amathathu eepensile ezimile okwexeshana ezantsi kumda wangaphambili wecomputer. Ungayisebenzisa le profayile yomda ukuba ufuna i-quartz countertop yakho ime endaweni njengoko itsalela ingqalelo kakhulu kwizinto. Oku kunokudityaniswa ne-quartz ejongeka ngathi yimarble ukuze yongeze idrama ekubonakaleni okupheleleyo kwekhitshi. Ikwalungele kakhulu izitayile zasekhitshini nezesiko. Umda wepensile kathathu unokukuxabisa ngakumbi ngenxa yokuba kunzima ngakumbi ukwenza xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zomphetho.
Izinto ezikwi-Countertop zifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo ngokubanzi, iisentimitha ezi-3 okanye u-1 ¼ intshi ubukhulu kunye neesentimitha ezi-2 okanye ii-intshi. Ubungqingqwa obuqhelekileyo be-quartz slabs yi-1 ¼ intshi kodwa buza kwezinye ubukhulu ezifana nee-intshi, i-intshi kunye ne-intshi enye. ICambria, yenye yezona zixhobo zithandwayo ze-quartz, ibonelela ngeesentimitha ezi-1 zamatye amade aqhele ukusetyenziselwa ukwenza iiprofayili zokuhlela ezenziwe ngocingo.
Xa kufikwa kubunqamle betafile, nokuba ithini na impahla, umgaqo oqhelekileyo wesithupha oqwalaselweyo ngulo: 2 iisentimitha zingqindilili zokubala kwindawo yokuhlambela ekhitshini, ubukhulu be-slab obucetyiswayo ziisentimitha ezi-3. Nangona kunjalo, oku kuyahluka ngokuxhomekeka kwizinto ezininzi ezinje: ukujonga okupheleleyo ofuna ukukufikelela ekhitshini lakho, kuhlahlo-lwabiwo mali, usetyenziso kunye nofakelo.
Iisentimitha ezi-3 zeetafile zokuthambisa zekartz
Iiticks ze-quartz slabs zomelele ngakumbi kwaye kulula ukuzifaka xa kuthelekiswa nokwahluka kwe-quartz encinci. Nangona liphezulu ngexabiso, i-3cm ye-quartz slabs eshinyeneyo ibonelela ngexabiso lexesha elide kuba yomelele kwaye ayithambekele ekophulweni kwaye iphucule ukusebenza kwiindawo ezinokusetyenziswa okunzima. Kulula ukuthutha nokuphatha. Ukongeza kuloo nto, ii-slabs ze-quartz ezijiyileyo ezinemigca embalwa ezinokunyusa ixabiso lee-countertops zakho.
Amanqwanqwa atyebileyo nangaphezulu e-quartz nawo anegalelo kumdla xa kufikwa kubuhle. Ubuninzi bempahla ye-countertop kukuba, kubonakala ngakumbi kwindawo, ngakumbi imibala kunye neepatheni. Imiphezulu yeetafile zewartz ezithe nkqo zinokusebenza njengendawo emangazayo yokujonga indawo.
I-Quartz slabs ezincinci okanye ezo zinesentimitha ezi-2 okanye ubukhulu obuncinci zifuna i-plywood substrate yofakelo kunye nenkxaso eyongeziweyo enjengomthi ukomeleza amandla ayo. Oku kuyacetyiswa ngamandla ngokukodwa kwi-countertop overhangs kwiikhikhini kunye nemivalo.
Iisentimitha ezi-2 zeetafile zekartz ezibanzi
I-slabs ye-quartz ye-Thinner inembonakalo entle kwaye icocekile. Oku kufanelekile kuyilo lwala maxesha nolwanamhlanje olunobugcisa obuhlaziyiweyo be-ultra. Olu hlobo lwe-quartz lukwasetyenziselwa ezinye iinkqubo ezinje nge-backsplashes, ukugubungela udonga, indawo zokuhlamba, izindlu zangasese, njl.
I-quartz slabs ezimbini zesentimitha zihlala zifuna inkxaso eyongezelelweyo kodwa ezahlukeneyo ezincinci zihlala zibonisa ezakhelwe ukomeleza. Oku kunceda ukuthintela ukwaphuka kwaye kunika itafile ye-quartz amandla ongezelelweyo.
Imiphezulu yeetafile kunye nezinto zomphezulu ziza kugqitywa ngeendlela ezahlukeneyo. Uhlobo ngalunye lokugqiba luvelisa isiphumo esahlukileyo kwinkangeleko yekhitshi ngelixa unikezela ngeempawu zabo ezintle nezingalunganga. Ukomelela kwemathiriyeli akuxhomekekanga ekugqityweni kwayo. Nokuba yeyiphi na oyikhethayo, imathiriyeli iya kuhlala yomelele kwaye yomelele.
Amatye endalo anezinto ezingaphezulu kwesibini ezigqityiweyo ezinje ngehoned, ipolishiweyo, ibrashi, inyibilikisiwe, idangatye kwaye idityaniswe Kodwa kwii-countertops ze-quartz, ezi zimbini eziphambili zigqityiwe kwaye zihlonishwe.
Imiphezulu yeetafile zwi likhazimlisiwe
Ipolishi luhlobo lwenkqubo eqhuba amatye endalo okanye ilitye elinobunjineli kuthotho lwamavili okucoca kunye neepads eziqhwabayo kunye nokusila umbandela ukuze ucoce umphezulu. I-quartz e-polished ine-surface ebonakalayo kwaye ibonakaliswe ngokubonakala kwayo. Ubume beetafile ze-quartz ezipholileyo zihamba kakuhle kwaye zenza ikhawuntara elungileyo yokusebenza.
Ukucoca, nokuba kungoku quartz okanye ilitye lendalo, kuthathwa njengeyona nto igqwesileyo ifumanekayo kwintengiso. Ithathelwa ingqalelo ukuba intle, intle kwaye isityebi. Isipili esifana nokukhanya sinika indawo ephucukileyo nenodidi kwizithuba ezenza ukuba ibe lukhetho oludumileyo kuzo zombini iiseto zasekhitshini zemveli kunye nezangoku. Imiphezulu yeetafile ze-quartz ezipholileyo zibonisa ukukhanya kakuhle kwaye zibonisa ubuhle be-quartz ngakumbi. Ukongeza kuloo nto, ipolishi inika i-quartz umbala oqaqambileyo notyebileyo.
I-quartz ekhazimlisiweyo kulula ukuyicoca ngenxa yomphezulu wayo ogudileyo, ongenasiphako kwaye ukongeza koko iphinda isuse ukufuma kakuhle. Imiphezulu yokubonisa ikwayala ukubonisa ii-smudges kunye neprinta zeminwe ezingaphantsi.
Iitafile zeQuartz eziHloniphekileyo
Ukuhlonipha yinkqubo ebandakanya ukugaya umphezulu wezinto kwindawo egudileyo, engaguquguqukiyo, ethe tyaba. Ngaphambi kokuba izinto zikhanye kakhulu, le nkqubo iphazanyiswa, ishiya izinto ezibonakalayo zibonakala zithambile. Ukunyaniseka kukwasusa amaqhuma kunye neenduli kumphezulu wezinto. Ngokungafaniyo ne-quartz ecekeceke ebengezelayo nebengezelayo, i-quartz eqaqambileyo ayinakukhanya kwaye inomphezulu we-matte ongashiyi kubonakalisa. Umbala we-quartz e-honed ulula kune-quartz ephothiweyo.
I-quartz ehloniphekileyo ingaba ne-sheen ephantsi okanye ayikho i-sheen. Umphezulu weetafile ze-quartz ezihonjisiweyo zigudile kakhulu ekuchukumiseni kwaye zikulungele kakhulu ukubala.
I-quartz ehloniphekileyo ifana nokubonakala kwesamente, isileyiti kunye nelitye lekalika. Olona ncedo luphambili lwe-quartz ehloniphekileyo kukuba ibamba ubuhle belitye lendalo kodwa inikezela ngezinto ezizinzileyo nezinzima ngakumbi.
Abanye babanini bamakhaya banokuyifumana isilela ekukhanyeni, kodwa i-quartz ehloniphekileyo iyenza ibe nomlinganiswa owahlukileyo kwizithuba zasekhitshini. Imiphezulu yeetafile ye-quartz ethembekileyo inikezela ngenkangeleko yendalo kunye nokuthamba ngakumbi xa kuthelekiswa ne-quartz ephothiweyo. Imiphezulu yeetafile ze-quartz ezihloniphekileyo zikwakhupha i-vibe engaqhelekanga kwaye ifanele uyilo lwangoku kunye nolwanamhlanje. Ukuziva ukhululekile ukuba kunikezela kwiindawo zekhitshi kwenza ubumnandi bube mnandi ngakumbi kwaye bumeme. Ngaphantsi kwesibane sekhabhathi se-LED, imiphezulu yeetafile ye-quartz eqaqambileyo nayo ijongeka ilungile njengoko ukukhanya kungoyiki kwaye kungabhengezwa. Xa kuthelekiswa ne-quartz e-polished, i-quartz e-honed yinto eqhelekileyo kwaye abanini khaya bayayithanda imbonakalo yayo efihlakeleyo.
Imiphezulu yeetafile ze-quartz eziHloniphekileyo ziyafumaneka ngemibala eyahlukeneyo, kuxhomekeke kuhlobo kunye nomenzi. UCesarestone, umzekelo, ubonelela ngemibala emithathu yokugqibezela kwabo ukugqwesa kwaye okwahlukileyo kufana nezinto zamatye endalo. UMisty Carrera luhlobo lwehartz quartz elinganisa ukubonakala kwemarble yendalo. I-Desert Limestone, kwelinye icala, ijongeka njengelitye lekalika, ngelixa eyahlukileyo yokugqibela, Ingqalutye, ibonakaliswa ngombala ongwevu ofana nekhonkrithi.
Kwigama le-Silestone, banikezela ngaphezulu kokugqitywa kwesibini kwe-quartz kwaye ukugqitywa kwe-honed kuhlala kubhekiswa kuko njengokugqibela kwe-suede.
Imiphezulu yeetafile ze-quartz ezihloniphekileyo zifuna ulondolozo ngakumbi xa kuthelekiswa nemiphezulu yeetafile ye-quartz. Iminwe, iminwe, amabala kunye negrisi ziyaqapheleka kwiindawo ezihloniphekileyo, ngenxa yoko kufuneka ukosulwa ngamanye amaxesha. Imisonto kunye namalungu ayabonakala ngakumbi, kodwa oku kunokuncitshiswa ngokubuza umenzi wakho we-quartz ukuba avelise isalbhu enye ehambelana neemfuno zakho zoyilo.
Yeyiphi engcono, i-quartz e-polished okanye i-quartz e-honed?
Uninzi lwakho unokuzibuza, luhlobo luni lokugqiba olungcono xa kuziwa ekusebenziseni i-countertop yekhitshi. Ewe, akukho mpendulo iqinisekileyo. Zombini ezigqityiweyo zinezibonelelo zazo kunye nezinto ezingalunganga, ngelixa nganye nganye inika umlinganiswa othile kwinkangeleko yendawo yakho yasekhitshini. Kuxhomekeke kukhetho lwakho lobuqu kwisitayile kunye neemeko ezikhoyo zekhitshi lakho kunye nokuhonjiswa kwekhaya lakho ngokubanzi. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukomelela kunye nobunzima beetafile ze-quartz akuchaphazeleka kukugqitywa kwayo. Nokuba upholisiwe okanye uqaqambile, usafumana ukusebenza okuphezulu okufanayo nokunikezelwa ziitafile zekartz. Unokulinganisa iinketho zakho ngokusekwe kwezi zikhokelo kwaye ukhethe ngononophelo ukuba yeyiphi eyona ilungele ikhaya lakho.
Imiphezulu yeetafile zeQuartz ziqhuba kakuhle xa kufikwa ekusebenziseni ikhitshi, kodwa ngaba zinokuma kwiindawo ezihlala ziveliswa kumanqanaba aphezulu okufuma kunye nokufuma? Xa uthatha isigqibo sokuba uyisebenzisa phi i-quartz njengomphezulu kunye nokugqiba izinto, gcina engqondweni enye inyani-iQuartz ilungele kuphela ukusetyenziswa kwangaphakathi. Oko kuthetha ukuba, ayikhuthazwa indawo yokupaka ngaphandle kodwa inokusetyenziselwa igumbi lokuhlambela.
Imiphezulu yeetafile zeQuartz ayisiyiyo kuphela into esebenzayo kunye nekhethelo kwiikhikhini kodwa nakwindawo yokuhlambela. Sonke siyayazi ngoku ukuba i-quartz yinto engena phandle ethi ithethe ukuba ayinakungena emanzini. Amagumbi okuhlambela, athathelwa ingqalelo njengendawo emanzi ekhaya, kufuneka abe nezinto ezigqityiweyo ezingayi konakaliswa kukuvezwa rhoqo kukufuma, kwaye i-quartz inokuphila kwiimeko ezinjalo. Imiphezulu yeetafile zetartz ezisebenzisa igumbi lokuhlambela azichanabeki ekubunjweni nangexoshomba kwaye zicocekile ukuba zingasetyenziswa. Ukongeza kuloo nto, imiphezulu yeetafile zekartz yokuhlambela akufuneki ziphinde zenziwe kwakhona ukuze zikhuseleke. Ke akufuneki ukuba ukhathazeke malunga nokugcinwa kunye neenkqubo zokulondolozwa okuphezulu.
Kuba iikhawuntari zokuhlambela nazo zihlala zisetyenziswa kwaye zinzima, kubalulekile ukuba izinto zayo zokugqiba zomelele kwaye zikwazi ukumelana nokudinwa kwemihla ngemihla. Imiphezulu yeetafile zeQuartz zinokukwenza oko, kuba zihlala ixesha elide, zomelele kwaye zihlala ixesha elide. Ngaphandle kwalonto, i-quartz inokusetyenziselwa usetyenziso olwahlukileyo kwigumbi lokuhlambela, njenge-backsplash, i-accent okanye ityhubhu yokugqiba izinto.
Ngaphezulu kwayo yonke indawo, imiphezulu yeetafile zetafile yequartz nayo inomdla kwaye iyanceda ukuba uyile uyilo lokuhlambela olubonakalayo oluhle, olunesitayile nolumangalisayo. Imibala eyahlukeneyo kunye neepateni ezinazo i-quartz ziya kwenza ukuba ukwazi ukuyila i-countertop efanelekileyo yokuhlambela eya kuthi ihambelane nobuhle bebandla lakho lokuhlambela.
Owona mgangatho uphezulu weetafile ze-quartz ngokubhekisele kwinkangeleko yazo kukufana kwazo kufutshane nezinto zelitye zendalo ezinjengeemabhile kunye negranite. Imiphezulu yeetafile ze-Quartz zithatha ubuhle obucacileyo kunye nobuhle belitye lendalo ngaphandle kwesidingo solondolozo oluphezulu. Uncedo lokusebenzisa i-marble njengemiphezulu yeetafile ze-quartz kukuba ikuvumela ukuba uzise ukuziva okumnandi ekhitshini lakho, ngaphandle kokuncama umgangatho kunye nokuqina, okwenza ukuba ibe lukhetho olusebenzayo kubanini bamakhaya.
Nangona abanye abaninikhaya bekhetha imarble yokwenyani, imiphezulu yeetafile zekartz zezona zilungileyo kuba ayinabungozi kwaye ayinakungcolisa. Umahluko omnye omkhulu onazo ezi zinto zimbini kukuba imarble yokwenyani iyaphola ngaphandle kwebala, kwaye kunjalo, ilitye lobunjineli alikho. Kodwa imiphezulu yeetafile zekartz zenza oku kusilela ngokubonelela ngomhlaba onzima kwaye owomeleleyo.
Imabhile emhlophe lukhetho oluqhelekileyo kwiikhitshi zesintu ezihombisileyo. Kwaye ekubeni ifunwa ngokubanzi, bonke abavelisi beetafile ze-quartz banikezela olu luyilo. Uninzi lwee-countertops ezimhlophe ze-quartz zibukeka njengemabula. Iimpawu ezahlukeneyo zinika imiphezulu yeetafile ze-quartz ezinombala oqaqambileyo omhlophe okanye ococekileyo we-beige ogxininiswe kwiipateni ezimdaka zegrey veining. Ezinye zibonisa imithambo yegrey epholileyo ethambileyo, ngelixa ezinye zibonisa imithambo esindayo ebangela ukuba i-countertop ibonakale kwindawo ekhitshini. Uninzi lwala ma marble amhlophe afana neetafile ze-quartz zijongeka njengemabula yecarrara. Ngaphandle kokumhlophe, imarble efana neetafile ze-quartz zikwanikezelwa ngemibala eyahlukeneyo enje ngombala omnyama, omnyama kunye nezinye iithoni zomhlaba.
Abavelisi betafile yeQuartz abanjengoSilestone, iMSI kunye neZodiaq baneendlela ezininzi zokuyila ezilinganisa inkangeleko yemarble. UCesarestone unikezela ngeemabula njengee-countertops kwaye zijongeka njengeyona nto yokwenyani. ICambria inelayini yabo yemarmore enikezela ingqokelela eyahlukeneyo yemibala kunye neepateni. Nayi eminye imizekelo yeetafile ze-quartz ezibukeka njengeemarble:
Imiphezulu yeetafile zekartz zeCalacatta
• Imiphezulu yeetafile zeQuartz ezibukeka njengemabhile emhlophe enemithambo engwevu:
Igolide yeCalacatta nguSilestone - Bona imifanekiso engaphezulu Quartz yeCalacatta Apha.
ICalcatta Nuvo nguCesarestone
Grey eNqabileyo nguCesarestone
I-Statuario Maximus ngu-Caesarstone (imithambo evelele ngakumbi)
I-Statuario Nuvo ngu-Caesarstone (umthambo othambileyo)
ICarrara Ngwevu yiMSI
ICashmere Carrara yiMSI
ICalcutta Grey nguQuartzmaster
Urar Carrara nguZodiaq
• Imiphezulu yeetafile zewartz ezibukeka njengemabhile enemibala yomhlaba enemithambo emhlophe (isiseko esimdaka ngegolide okanye segolide):
Ukusa kukaTuscan nguCesarestone
IBrighton entsha yiCambria
• Imiphezulu yeetafile zewartz ezibukeka njengeemabhile ezimnyama ezinemithambo emhlophe:
UVanilla Noir nguCesarestone
• Imiphezulu yeetafile zeQuartz ezibukeka njengemabhile emhlophe enemithambo emhlophe:
U-Queen Anne waseCambria
U-Ella nguCambria (ngwevu ethambileyo ngemithambo emnyama engwevu)
Xa isetyenziselwa iikhitshi, imiphezulu yeetafile ye-quartz ejongeka njenge-marble izisa ubuhle, ubucukubhede kunye nokuziva okuhle.
Xa ujonga imiphezulu yeetafile zekartz, uya kudibana neempawu ezininzi zezinto. Ezinye zazo zithandwa kakhulu kunabanye, kwaye uphawu ngalunye lubonelela ngemigca eyahlukileyo yemibala ye-quartz yemibala kunye neepateni zokubonelela abathengi.
Nokuba yeyiphi i-brand, zonke iitafile ze-quartz zilandela inkqubo efanayo yoqobo eyayiqalwe yinkampani yaseBreton ngaphezulu kweminyaka engama-50 eyadlulayo. Kuba itekhnoloji yeBretonstone ibambe ilungelo lobunikazi koomatshini, banike ii-brand ezingama-52 ilayisensi yokwenza imiphezulu yeetafile zekartz ngokwemigangatho yazo.
Umgangatho wezinto ezifanayo uyafana nazo zonke ii-quartz countertop brand. Zonke ii-countertops ze-quartz zinokwakheka kwezinto ezibonakalayo, ubunzima, ukuzinza, i-porosity ephantsi kunye nokuchasana kwamabala, ukukrola kunye nobushushu. Ukwahlukana kuphela kwintengiso nganye ye-quartz i-countertop inobungakanani be-slab, iwaranti, intengo, unyango olujikelezayo, amagama ombala kunye noyilo.
Njengoko sele kukhankanyiwe, uphawu ngalunye lwetheyibhile ye-quartz ivelisa uluhlu lwazo loyilo olubandakanya ukubonakala kwezinto ezibonakalayo. Imibala kunye neepateni ezinje ngemigca, imithambo, ukubhabha, ukungcola kuyahluka kuhlobo ngalunye njengoko zinokwenza ngokukhululekileyo ukuba uhlobo ngalunye lwe-quartz lubukeka njani. Umbala ngamnye we-quartz unalo negama elithile, kuxhomekeke kwinto oyinikwa ngumvelisi. I-quartz emhlophe ecocekileyo umzekelo yaziwa ngokuba yi-White White ye-Caesarstone, kodwa i-Yukon Blanco ye-Silestone, nangona bobabini benembonakalo efanayo. Iiprofayili ze-Edge ziyahluka kuhlobo ngalunye kuba oku kuhlala kwenziwa kumzi-mveliso kunokuba kongezwe ngumenzi wezinto. Ezinye ii-quartz ze-countertop brand zinikezela kuphela ngeendlela ezintathu zokujikeleza, ngelixa ezinye zinokunyanga okuntsonkothileyo kunye nokwahluka okungafaniyo.
Ubungakanani besilayidi buyahluka kuhlobo ngalunye. Abanye abavelisi banikezela ngee-countertops ezikhethiweyo ze-quartz eziza ngobukhulu obuqhelekileyo. Ngawo wonke umahluko kuyilo kunye nobukhulu, amaxabiso entengiso nganye ye-quartz ayaphambana. Oku kunokuba luncedo xa ujonge i-quartz ye-countertop efanelekileyo ekhayeni lakho kuba ikunika isiseko sokuthelekisa kunye nezinye iindlela onokukhetha kuzo ngokubhekisele kwiindleko.
Ukongeza koku, imiphezulu yeetafile zekota zize newaranti evela kumthengisi kwaye uphawu ngalunye lunikezela ngobude obahlukeneyo, imigaqo kunye nokusikelwa umda kwinto nganye ethengiweyo.
Uninzi lweemveliso zetheyibhile zewartz ezithandwa kakhulu :
UCesarestone -U-Caesarstone ngumvelisi womgangatho we-quartz ovela kwa-Israyeli. Yayenziwe kwasekuqaleni ukuze ithathe indawo ye-terrazzo tile eyayisaziwa ngaphambili kweli lizwe.
UCesarestone unemibala engama-53, uhlobo olu-8 lomda kunye nezinto ezintathu ezithi zi-smooth, matte kunye ne-satin. Inika ezimbini iindidi ze-slab thicknesses kwaye ine-intshi engama-56.6 nge-120 intshi yesayizi ye-slab. Yonke i-quartz ka-Caesarstone iza newaranti yobomi.
UCesarestone uyaziwa ngokuvelisa i-quartz enelitye lendalo njengokubonakala. Umda weCesarestone phakathi kwezinye iimveliso ze-quartz kukuba unikezela ngeprayim ye-quartz equka iitoni ezixabisekileyo ezisemgangathweni kumphezulu wazo ukuvelisa uyilo olungaqhelekanga. Oku kwaziwa ngokuba yingqokelela yeConcetto equlathe ishumi lolunye lohlobo loyilo oluthe lwagungqa iinkuni, iagate, idumortierite kunye neliso lengwe. Olunye uthotho oluphawulekileyo yingqokelela yeMotivo enikezela ngobume obucekeceke kunye neepateni ezibhalwe ngathi yileyisi okanye ulusu lwengwenya. Oku kugqityiwe kugqibelele ukuba ufuna ukwenza ikhitshi lakho libe lelona khange khaya lakho.
Ilitye -I-Silestone luphawu lwe-quartz kwinkampani yase-Italiya iCosentino ese-Almeria, eSpain. Ngokubanzi, iSilestone inelona nani linemibala phakathi kweempawu ezintathu, uyilo oluyi-142 onokukhetha kulo, ukuba luchane ngqo. Inika iintlobo ezili-15 zokuhlela kwaye iyafumaneka kwisiphelo esigudileyo, se-suede kunye nevolcano. Ukugqitywa kwe-suede kubonakala ngama-pores amancinci ngelixa ukugqitywa kwe-volcano kubonakala ngama-pores amakhulu.
Xa kufikwa kubungakanani, i-quartz Silestone iza ngobukhulu beslabi esinee-intshi ezingama-55 nge-120 intshi, ngelixa i-humbo slab ingama-intshi ama-63 nge-128 intshi. Ineendidi ezintathu ezahlukeneyo zedayi, oko kukuthi, iisentimitha eziyi-1.2, iisentimitha ezi-2 kunye neesentimitha ezi-3. Ngokungafaniyo nezinye iimveliso ezimbini ezidumileyo, uSilestone unewaranti elinganiselweyo yeminyaka engama-25.
Yintoni ebeka iSilestone ngaphandle kwezinye iimveliso kukuba inikezela ngemibala eqinileyo enesibindi njengobomvu, imifuno, iiorenji kunye neblues ezilungele useto lwangoku lwekhitshi. I-Silestone ibonelela ngokudityaniswa kunye nokuhambelana kwemibala, isitayile kunye nokugqitywa kweemveliso zazo ukuvelisa izinto ezizezakho ezizodwa ukuze zilingane incasa yomntu kwisitayile kunye nokuhonjiswa kwasekhaya okukhoyo.
ICambria - I-Cambria yinkampani esekwe e-US eqale ukuvelisa iindawo ze-quartz ngonyaka ka-2000. Eyona ndawo inkulu yokuthengisa Imiphezulu yeetafile zekartz zeCambria Kungenxa yokuba ibonelela ngolona hlobo lubanzi lwemibala, uyilo, unyango lwemphetho kunye nobukhulu besilayidi. ICambria inemibala eli-133 kunye noyilo, iiprofayili ezili-19 ezisecaleni ezikhoyo kwaye iza ngokugqibeleleyo, okuxubileyo kunye nokugqiba okunzima.
Ukongeza kuloo nto, iCambria ineyona ndlela ijongeka ngayo yendalo. Ngaphandle kwalonto, ikwavumela ukuba imathiriyeli ilungiselelwe ngokokuthanda komntu, inika abaninimzi igumbi elininzi lokulinga xa kufikwa kuyilo.
Ubungakanani beeslabi ezisezantsi zeetafile zekartz zeCambria zii-intshi ezingama-55.5 nge-122 intshi, ngelixa i-jumbo slabs zii-intshi ezingama-65.5 ngo-132 intshi. Ubunzima beeblabs ze-quartz ziqala ukusuka kwiisentimitha ezi-1, iisentimitha ezi-2 kunye neesentimitha ezi-3. Iza newaranti yobomi, nangona kunjalo iCartz yaseCambria ayifumaneki kwiivenkile zokuphucula amakhaya kwaye inokuthengwa kuphela kubayili bezakhiwo, abakhi kunye nabaqulunqi.
Olunye uphawu oluphezulu lwee-quartz countertop:
Zodiaq -I-Zodiaq yi-quartz eyenziwe ngu-DuPont, inkampani eyile umphezulu oqinileyo weCorian. Zitayile ze-quartz ze-zodiac ziza kuyilo ezahlukeneyo kunye nemibala engama-54 kwaye ziza ngobukhulu obuqhelekileyo beesentimitha ezingama-63 x 120 intshi, kunye nobukhulu beesentimitha ezi-2 kunye neesentimitha ezi-3.
LG Viatera - usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows I-LG Viatera iveliswa yinkampani eyaziwayo yaseMzantsi Korea ye-LG eyenza izixhobo zombane, izixhobo zombane, iikhemikhali kunye nezixhobo. I-LG Viatera ine-64 yoyilo eyahlukileyo kunye nemibala.
I-Pental - I-Pental yenye yomhambisi osekwe e-US. Yileyibhile ye-quartz yabucala eSeattle evelisa iindawo ze-quartz ezingabizi kakhulu ezikumgangatho ophezulu wezinye iimveliso. Ineengqokelela ezintathu ezizezi: ukukhuthaza ingqokelela, ingqokelela yendalo kunye nokuqokelelwa kwendalo.
Daltile Enye Quartz - I-Daltile yinkampani evelisa iiceramic, i-porcelain kunye neethayile zeglasi. UDaltile ubonelela ngemibala eyahlukeneyo engama-38 kunye noyilo ngexabiso eliphantsi.
Ngaba kufanelekile ukuba wenze i-DIY okanye uqeshe ingcali yokufaka imiphezulu yeetafile zekartz?
Ngokungafaniyo nemiphezulu yeetayile, ukufakelwa kweetafile ze-quartz kungcono kushiyeke kubaqeqeshi ngenxa yenkqubo enzima yabasebenzi. Ukuqesha isifakeli sobuchwephesha ukwenza umsebenzi wakho kuqinisekisa umgangatho ophezulu womsebenzi kunye ne-countertop ehlala ixesha elide.
Nangona ingenabuthathaka kwaye ibuthathaka njengelitye lendalo, i-quartz kunokuba nzima ukuyiphatha ngenxa yobunzima bayo. I-Quartz slabs zinzima kakhulu kwaye isandla esongeziweyo siyadingeka ngexesha lofakelo. Ukuba ayiphathwa kakuhle, i-quartz inokuqhekeka. Khangela izifaki eziqinisekisiweyo zokuqinisekisa ukuba imiphezulu yeetafile zekartz zifakwe ngokugqibeleleyo.
I-Quartz inokunqunyulwa ngobukhulu obahlukeneyo, kodwa ayinakubuyiselwa kwakhona. Qiniseka ukuba yonke into ilinganiswe ngokufanelekileyo ngaphambi kokufakwa, ngokufanelekileyo i-countertop kufuneka ilinganiswe ngokuchanekileyo kwaye isikwe kubungakanani obufanelekileyo kunye nemilo. Ukuba kufuneka kwenziwe uhlengahlengiso oluthile, ukusetyenziswa kwesarha emanzi kuyafuneka.
Imiphezulu yeetafile zeQuartz zisenokubalwa zisengqiqweni, ngaba ziyazenzela iiprojekthi ukuba umnini-khaya unezakhono ngokwaneleyo kwaye uxhobile ngezixhobo ezifanelekileyo nezixhobo. I-slab ye-quartz kufuneka yenziwe ngokuchanekileyo kwimeko efanelekileyo kunye nobungakanani ngaphambi kofakelo. Uninzi lwabanini bamakhaya alunazo izixhobo ezifanelekileyo zokusika kunye nokupholisha i-quartz ukuze ukuthenga i-slabs ezenziwe kwangaphambili yeyona nto ibheja kakhulu ye-DIYers.
Ukufaka ii-Quartz Countertops
Kukho izinto ezibaluleke kakhulu ekufuneka uziqwalasele xa ufaka iikhabhathi ze-quartz ziikhabhathi ezingaphantsi kwayo. Kuba imiphezulu yeetafile zekartz zinzima kakhulu, iikhabhathi ezisisiseko ekhitshini lakho kufuneka zomelele ngokwaneleyo kwaye zikulungele ukuthwala ubunzima. Kungenxa yoko le nto uninzi lwabathengisi lucebisa isiseko esomeleleyo esomeleleyo njengoboya okanye ukuqiniswa ukuze sikwazi ukuxhasa imiphezulu yeetafile zekartz.
Izixhobo zokufaka imiphezulu yeetafile zekartz
Olwenziweyo zwi esile
• Lungisa indawo. Ukuba iikhabhathi zasekhitshini zisandula ukufakwa, linda ipeyinti ukuba yome kuqala ngaphambi kokufaka imiphezulu yeetafile zekartz. Lungisa yonke into oyifunayo ngaphambili kwaye uqiniseke ukuba zonke izixhobo kunye nezixhobo zikufutshane ukonga ngexesha, umgudu kunye nemali. Hlaziya iimeko ezikhoyo zesiza ekhitshini lakho kwaye ucwangcise ngobuchule imisebenzi yokudiliza (ukuba ikhona), ukugaya kunye nokuhanjiswa kwezinto. Ukongeza kuloo nto, vala unikezelo lwamanzi ukuba uza kufaka isinki entsha kunye nompompo.
• Linganisa indawo. Usebenzisa iteyiphu yokulinganisa, linganisa ngononophelo isithuba sokumisela ubungakanani ngqo bekhabethe le-quartz ekufuneka lifakelwe. Ungazoba umzobo olula wobeko lwekhitshi lakho emva koko ubonise imilinganiselo ethathiweyo kumzobo. Qinisekisa ukuba umlinganiso uchanekile, ngelixa uthathela ingqalelo ubungakanani be-backsplash kunye nendawo efunekayo kuyo ngexesha lofakelo. Ukongeza koku, phawula ubungakanani besinki kunye nomngxunya ofunekayo kufakelo lwayo.
Nje ukuba imilinganiselo igqityiwe, ungathenga islab eyenziwe kwangaphambili enobungakanani obugqibeleleyo okanye uthenge islabhu enkulu kwaye uyinqumle kubume nobungakanani obufunekayo. Kunconywa ngakumbi ukuba uthenge i-slab esele yenziwe kuba iyanciphisa umsebenzi kwaye iqinisekisa i-quartz countertop efanelekileyo.
I-Quartz inokunqunyulwa ibe ngamacandelo ukwenza ukufakwa kube lula, kodwa gcinani engqondweni ukuba inani elincinci leemigangatho kufuneka lisetyenziswe. Kwikhitshi ezimile njengo-L, i-quartz inokunqunyulwa ibe ziingceba ezimbini kwi-90 degree angle. Unokucela umboneleli wakho ukuba afumane olona ncomo lubalaseleyo lwezixhobo kwaye, unokucela umenzi ukuba asike umngxuma we-quartz sink ngaphambi kokuba uhambise.
Sika imiphezulu yeetafile. Eli nyathelo linokuzikhethela, kuba njengoko kuchaziwe apha ngasentla, unokuthenga islab esele yenziwe ukuphelisa ukusika. Nangona kunjalo ukuba uthatha isigqibo sokuhamba ngenye indlela, phawula umbandela usebenzisa itheyiphu yompeyinti kwiindawo apho kufuneka zisikwe khona. Phambi kokusika impahla yakho, nxiba iiglavu zokhuseleko kunye neebhotile zokuzikhusela kulo naluphi na uthuli okanye inkunkuma.
Namathisela i-diamond blade kwi-saw. Kwesinye isiphelo sezinto, tshiza amanzi kwezinye izinto usebenzisa ibhotile yokutshiza ukuyifumana ifumile. Ukugcina i-quartz imanzi ngexesha lokusika linyathelo elibalulekileyo kuba kuthintela uthuli ekuqokelelekeni nasekugqumeni uphawu olwenzileyo ngelixa ugcina ubushushu ekutshiseni izinto.
Qalisa isarha kwi-quartz njengoko ulandela uphawu. Tyhala phantsi njengoko usiya phambili kwaye wenze ngononophelo ngaphandle kokungxama. Ukuthatha ixesha lakho kuya kuqinisekisa ukusikwa ngokuthe ngqo nangokuchanekileyo. Nje ukuba ugqibile, jonga kabini izinto kwaye ulinganise onke amacala ukuze uqiniseke ukuba ubungakanani buchanekile kwaye buchanekile. Ukongeza koku, yenza ukusikwa okuyimfuneko kwesinki okanye nakweyiphi na eyakhelwe kwizixhobo ezifana ne-hob okanye itoptop.
• Yoma izinto zakho ezomileyo. Ukubeka into eyomileyo kuya kukunceda ubone ukuba imiphezulu yeetafile zekartz ihambelana nekhabhathi yesiseko kakuhle okanye uhlengahlengiso kusafuneka lwenziwe. Ngaphandle kwalonto, ikunika umbono ngokubanzi malunga nendlela ikhitshi lakho lekhitshi elijongeka ngayo. Mane ubeke iziqwenga ze-quartz ngaphezulu kwe-countertop kwaye ujonge ulungelelwaniso kwaye wenze uhlengahlengiso oluyimfuneko. Emva kokubeka okomileyo, susa iziqwenga ze-quartz kwaye ubeke ecaleni.
• Khusela imiphetho yeekhabhathi zekhitshi. Sebenzisa iteyiphu yompeyinti ukugubungela imiphetho yeekhabhathi zekhitshi ukunqanda umonakalo. Eli nyathelo kufuneka lenziwe ngaphambi kokufakwa kokuncamathelayo ukuthintela ukutyibilika ebusweni bekhabhinethi.
• Faka imiphezulu yeetafile. Faka isincamathelisi sokwakha ngaphezulu nasemiphethweni yeekhabhathi ezisisiseko kwaye ubeke ngononophelo itafile yequartz ngaphezulu. Shiya igumbi elaneleyo lezinto zokubuyela umva. Beka uxinzelelo oluqinileyo phezu kwecomputer ye-quartz ukuze uqiniseke ukuba ibambelela ngokupheleleyo kwiikhabhathi ezisisiseko, emva koko usebenzise inqanaba ukuqinisekisa ukuba i-countertop ibekwe ngokufanelekileyo. Ngalo lonke ixesha jonga ukuba ngaba izinto zakho zilungelelaniswe ngokufanelekileyo neekhabhathi ezisisiseko.
• Usebenzisa i-silicone ecacileyo (okanye nayiphi na itywina le-silicone ehambelana nombala wee-counters zakho ze-quartz), tywina amalunga ngokuqhuba umpu we-silicone ngononophelo ecaleni kwemiphetho kunye nemiphetho ye-countertop. Sula nakuphi na ukugqithisa kwaye uvumele ukuba kome. Unokubeka umgca emaphethelweni ngetape yomzobi ukukhusela umphezulu wetafile yakho ye-quartz kunye nokucoca lula.
Vumela i-countertop ukuba yome iiyure ezingama-24 ukuya kwezi-36.
• Faka isinki yekhitshi. Beka ngononophelo isinki ngaphezulu kwe-countertop (oku kokonyuka kweesinki). Ukuba usebenzisa i-sink ye-downmount, unokufuna ukuguqula amanyathelo kwaye ufake isinki kuqala ngaphambi kokufaka izixhobo zokubala ekhitshini. Nje ukuba isinki ifakelwe ngokufanelekileyo, baleka ujikeleze imiphetho yesinki. Qhagamshela idreyini kwaye ufake itompu kunye nezinye izixhobo. Nje ukuba ugqibile, ngoku ungawavula amanzi akho kwaye i-quartz countertop yakho sele ikulungele ukusetyenziswa.
Ukugcina imiphezulu yeetafile zwi kulula. Iibhendi ezibophelelayo ezenza i-quartz ziyinika ibala elinganyangekiyo, elingenabungozi kunye nelomeleleyo. Kuba ayonakalisi ngokulula, imiphezulu yeetafile zekartz ziqinisekisiwe ukuba ziya kuhlala iminyaka ngelixa zigcina ukubonakala kwazo kuyathandeka.
Ukugcina imiphezulu yeetafile zekartz kubandakanya ukucoca yonke imihla nokucoca okunzulu. Ukucoca imihla ngemihla sisiseko esisisiseko osenzayo imihla ngemihla ukugcina iitafile zakho zekartz zicocekile kwaye zikhululekile ekungcoleni nasekuchithekeni. Ukucoca okunzulu kubhekisa kulondolozo lwamaxesha ngamaxesha olwenziwa rhoqo, kanye ngenyanga, ukugcina umphezulu wendalo kunye nokubonakala okucwebezelayo.
Ungawuthintela njani umonakalo wobushushu
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ubushushu obuchasene nobuchule beetafile ze-quartz zilinganiselwe. Ngaphandle kokuqina kwayo, kuhlala kuluncedo ukuthatha amanyathelo okhuseleko ukongeza ixesha lokuphila kwecomputer yakho. Ungaze ubeke iimbiza ezishushu, iipani kunye neeskillet ngokuthe ngqo ngaphezulu kweetafile. Sebenzisa iiphedi ezishushu, iitrivethi okanye ipleyiti encinci yokugcina izixhobo zasekhitshini ezishushu ukukhusela imiphezulu yeetafile zekartz. Kwakhona ubeke ukhuseleko olwaneleyo kwizixhobo ezishushu.
Ungathintela njani ukusikeka nokukrwela
Into efanayo iya ngokukrwela. Nangona i-quartz ihlala inganyangeki, kuyanceda ukuthatha amanyathelo okhuseleko xa usebenzisa iimela kunye nezinye izixhobo ezibukhali ekhitshini. Sebenzisa imiphezulu yeetafile yequartz njengekhawuntara yomsebenzi kwaye ibhodi yokusika isenokungabi yingozi kumphezulu ngokwawo, kodwa inokubangela ukuba izixhobo zakho zokusika kunye neebhlethi zingasebenzi ekuhambeni kwexesha. Kungcono ukusebenzisa iibhodi zokusika ngexesha lokulungiselela ukutya ukukhusela zombini izixhobo zakho zokubala kunye nekhitshi.
Isepha yokuthambisa esincinci okanye isepha
Imela yeplastiki ye-putty
Ulondolozo lwemihla ngemihla lweeComputer zeQuartz
Ngokubanzi, soloko ukhumbula ukuba ulondolozo lothintelo ngundoqo . Ukunika ingqalelo kwangoko ekuchithekeni nasekusuleni yonke imihla zezona mfuno zisisiseko zokugcinwa kweetafile ze-quartz. Esona sixhobo sicocekileyo sokucoca i-quartz sokucoca izinto ezisisiseko kunye nesiqhelo yisepha ethambileyo kunye nesisombululo samanzi ashushu.
Ezinye iindlela zesisombululo sokucoca imihla ngemihla ngumxube weviniga yasekhaya kunye namanzi. Hlanganisa iipesenti ezingama-25 zeviniga kunye neepesenti ezingama-75 zamanzi kwibhotile yokutshiza. Sula imiphezulu yeetafile ye-quartz ngesisombululo usebenzisa ilaphu elimanzi elifumileyo, emva koko uhlambe ngamanzi ashushu.
Ukucoca nzulu imiphezulu yeetafile zwi
Ukugcinwa kwamaxesha athile kwiitafile ze-quartz kubandakanya ukucoca okunzulu. Oku kufuneka kwenziwe qho ukuqinisekisa umgangatho, inkangeleko kunye nobude beetafile ze quartz. Ukutshiza inani elinesisa lesicoci somhlaba esingagudisiyo okanye isepha engafunekiyo yesepha kunye nokuyiyeka ihlale kangangeemitha ezili-10 kwi-countertop iya kukunceda wenze iqhinga. Xa ugqibile, qiniseka ukuba usula nayiphi na intsalela ngesiponji esithambileyo.
Ukubulala iintsholongwane kwiComputer
Imiphezulu yeetafile yekhitshi ihlala inxibelelana nenyama eluhlaza, iinkukhu, ukutya kwaselwandle kunye nentlanzi. Ukuqinisekisa ukuba azigcini naziphi na iintsholongwane eziyingozi, qiniseka ukuba uyabulala iintsholongwane yonke imihla. Sebenzisa iitawuli zamaphepha ukosula nayiphi na intsalela, ukufuma kunye nenkunkuma. Tshiza imiphezulu yeetafile ngesicoci sokucoca ulwelo esitshiza intsholongwane kwaye uvumele ukuhlala imizuzu embalwa. Sula imiphezulu yeetafile usebenzisa itawuli yephepha ecocekileyo, uqinisekise ukuba akukho ntsalela iseleyo. Ngenye indlela i-bleach yasimahla yokubulala iintsholongwane ingasetyenziselwa ukulungisa ngokukhawuleza.
Ukucoca amabala kunye neekhemikhali
Nangona i-quartz iyakuxhathisa amabala, kubalulekile ukuba usule ukuchitheka okanye ucoce ubumdaka kwangoko ngaphambi kokuba uqalise ukoma.
Ukuchitheka kolwelo. Ulwelo olufana newayini, iti, iviniga, isoda, ijusi yelamuni, ikofu ayinabungozi kwimiphezulu yeetafile zekartz. Kodwa iidayi ezomeleleyo, izinyibilikisi kunye neekhemikhali zinokubangela ukuba umbala ubonakale ngokusisigxina kwiindawo ezikumgangatho weplitha ye-quartz. Ukuthintela nawuphi na umonakalo osisigxina, sula kwangoko nayiphi na into engamanzi echithekileyo ngokukhawuleza ngelaphu elicocekileyo nelifumileyo.
Amabala aqinileyo. Amabala anzima kwaye aqhubekayo anokuqwalaselwa ngokusetyenziswa kwezinto ezincamathelayo ezinokukhutshwa kumphezulu wecomputer kwaye zihlanjwe ngamanzi. Ukuchitheka komileyo kunokucocwa kusetyenziswa iglasi esemgangathweni okanye isicoci somhlaba kunye nesiponji esirhabaxa. Izicoci zeCitrus ezifana neGoo Goo Gone zinokususa amabala anzima. Yitshize kwindawo echaphazelekayo yetafile ye-quartz, masihlale imizuzu eyi-10, wosula ngelaphu elicocekileyo emva koko uhlambe ngamanzi ashushu.
Ngenye indlela, isopropyl yokurabha utywala okanye i-alcohol echongiweyo inokusetyenziselwa ukucoca amabala anzima. Thela isopropyl utywala kwisiqwenga semanzi emanzi emva koko uyihlikihle kwibala. Yipule kakuhle ikhawuntari ngamanzi ashushu.
Gcoba kunye neoyile. Ukupheka igrisi kunye neeoyile kumphezulu weplanethi ye-quartz kungasuswa kusetyenziswa imveliso yokuthambisa. Uninzi lweemveliso zokunciphisa ziza nemiyalelo ethile evela kumenzi, qiniseka ukuba uyayilandela. Ngenye indlela, kungasetyenziswa iintsholongwane zokubulala iintsholongwane, kodwa qiniseka ukuba azinablitshi yasimahla kwaye ihlanjwe kwangoko emveni koko.
Amabala okusigxina asisigxina. Amabala okumakisha asisigxina yingxaki eqhelekileyo kumakhaya anabantwana abancinci. I-ink kunye nesiphawuli sokumakisha esisigxina sinokucocwa kusetyenziswa isiqwenga selaphu elifumileyo kunye nesitshizi sokurhweba okanye isicoci, njengeGoo Goo Gone. Hlikihla ibala ngelaphu kunye nemveliso emva koko uhlambe kakuhle ngamanzi ashushu. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukukhusela ngaphezulu kweetafile zakho ze-quartz, ungasebenzisa iiplacemats okanye iphepha lekraft ukukhusela abantwana bakho ekubhaleni ngokuthe ngqo kumphezulu.
Ezinye iimveliso kunye nokwakha phezulu. I-Gum, ukutya, ipeyinti kunye nezinye iintlobo zeemveliso zinokususwa ngokukrwela ngobunono kusetyenziswa imela yeplastiki yokufaka izinto. Kwakhona, oku kufuneka kwenziwe ngaphambi kokuba zome kwaye ziqine.
Isiqithi setafile yequartz engxangxasi yamanzi
Yintoni omele ukuyiphepha xa ucoca imiphezulu yeetafile zekartz
Kulumkele ukusebenzisa iiphedi zokukrola kwiitafile ze-quartz njengoko zinokuwuthambisa umphezulu wee-quartz. Kunqande iiarhente zokucoca kunye neemveliso eziqukethe izinto ezingamanzi, iisepha ezisekwe kwioyile kunye nokungcoliseka njengoko kunokwehlisa ukubengezela kwendalo kunye nomphezulu womphezulu weetafile zekartz. Iikhemikhali ezinoburharha kunye neemveliso ezinje nge-turpentine, i-nail polish remover, i-drain cleaner kunye ne-aishwasher yokuhlanjululwa kwe-dishwasher nayo ayicetyiswa kuba inokuphula kwaye ichithe iibhondi phakathi kwe-resins kunye ne-quartz. Izinto eziphezulu ze-ph ezinje ngeblitshi egxilwe okanye izinto zokucoca i-oveni zinobungozi obukhulu kumanqwanqwa e-quartz.
Izinto ezinobumba kakhulu kunye nealkaline kufuneka ziphetshwe ngokupheleleyo, nangona kunjalo, izisombululo ezinamandla zealkaline ezifana neblitshi exutywe maxa wambi ziyanyamezeleka. Izicoci ezisekwe kwi-Ammonia ziyingozi ngoba zinokubangela umbala weetafile zekartz ezinombala kakhulu ukuba zitshabalale ngokuhamba kwexesha. Iisepha ezisekwe kwioyile zithathwa njenge-no-hayi kuba nayiphi na intsalela eshiye ngasemva umphezulu wee-countertops ibangela ukuba i-quartz ithambe kwaye inciphise ukukhanya kwayo kwendalo. Kwimeko yokuvezwa kwenye yezi zinto, kwangoko kwaye uhlambe kakuhle indawo echaphazelekayo yetafile ye-quartz ngamanzi.
Qiniseka ukuba isicoci kunye nemveliso oyisebenzisayo iyahambelana nodidi kunye nophawu lwetrokethi yakho ekuthiwa yi-quartz. Ungahlala ubuza umenzi malunga nezikhokelo zolondolozo ukugcina umgangatho weetafile zakho zekartz.
Isepha ethambileyo okanye isepha
Ilaphu elithambileyo okanye ilaphu le microfiber
Amanyathelo okupakisha ii-Quartz countertops
Coca itafile ye quartz. Usebenzisa nayiphi na into yokucoca i-quartz countertop ekhankanywe ngasentla, njengesepha yesepha kunye nesisombululo samanzi okanye iviniga kunye nesisombululo samanzi, sula ngobunono kwaye uhlikihle i-quartz countertop yakho. Nangona unganyangeki ekuqaleni, kungcono ungasebenzisi iphedi egudileyo njengoko inokushiya imijelo kwipolishi okanye kwintsalela kumphezulu wecomputer. Ukuba ibala liyaqhubeka, shiya isisombululo sokucoca ukuhlala imizuzu emininzi ukuvumela amabala anzima ukuba aphule. Ngee-countertops ze-quartz, akukho mfuneko yokuba nexhala malunga nokukrwela umphezulu ngelixa usula njengoko ingeyiyo into ethambileyo nebuthathaka. Qiniseka nje ukuba imiphezulu yeetafile icocekile ngaphambi kokwenza enye into.
Hlanganisa i-quartz countertop ngokupheleleyo. Ukoyisa imiphezulu yeetafile zekartz kuhlala kubangelwa yisepha kunye nentsalela yokutya eseleyo ngaphezulu. I-Ansd kuba imiphezulu yeetafile ze-quartz azisebenzi, nayiphi na into engamanzi okanye ukutya okuchithekileyo ayingeni kuloo nto endaweni yoko ishiya ifilimu ngaphezulu. Ukuqinisekisa ukuba akukho sisombululo sokucoca kunye nentsalela eseleyo ngakwitafile yequartz, kufuneka ihlanjululwe kakuhle ngamanzi.
Usebenzisa ibhotile yokutshiza, sebenzisa amanzi ngokukhululekileyo kwi-countertop kwaye uyivumele ukuba inyibilike. Emva koko, sebenzisa isiponji ukucoca ngobunono imiphezulu yeetafile ye-quartz. Sula amanzi ngelaphu elicocekileyo nelomileyo, uqiniseke ukuba akukho migca yenziweyo. Ngaphandle koko, i-squeegee ingasetyenziselwa ukufezekisa ukukhanya kwe-streak free. Unokujonga kabini imiphezulu yeetafile zekartz zemigca xa sele yomile ngokupheleleyo.
Tshiza imiphezulu yeetafile yequartz ngesicoceko sefestile. Mhlawumbi uyazibuza ukuba kutheni usebenzisa isicoci sefestile xa ucoca imiphezulu yeetafile. Kulungile kubaqalayo, abacoci befestile ngabasebenzi bokucoca ii-arhente kwaye benza umsebenzi owanelisa kakhulu xa kusenziwa igrisi yokusika. Njengoko sonke sisazi, imiphezulu yeetafile yasekhitshini igcwele igrisi njengoko zihlala zisetyenziselwa ukupheka kunye nokulungiselela ukutya mihla le. Igrisi inokwakha kwaye ekugqibeleni yenze ifilimu engabonakaliyo. Ifilimu yokupheka ingasuswa ngokusebenzisa isicoci sefestile esithembekileyo.
Tshiza isixa esincinci sokucoca i-windows ngaphezulu komphezulu wetafile. Qiniseka ukuba awutshizi ngaphezulu kwaye ufake isicelo kwinto efunekayo ukuze uqiniseke ukuba nakuphi na ukugqithisa kususwa ngokulula. Sula yonke imiphezulu yeetafile ngelaphu elithambileyo kwaye wenze oku ngasekhohlo ukuya kwicala lasekunene, emva koko uye ngaphezulu phezulu nasezantsi. Emva koku, sebenzisa itawuli yephepha ukuqinisekisa ukuba akukho micu yelaphu okanye ilint eshiyekileyo.
Ukucoca iifestile kushiya i-quartz countertop ekhanyayo. Iyangxama ngokukhawuleza kwaye ifuna umgudu omncinci wokufaka isicelo. Ngenye indlela, izinto zendalo kunye nezendalo ezicocekileyo ezingenazichiza zinokusetyenziswa njengoko zisebenza ngendlela efanayo, kodwa azinabungozi bungcoliseko lweekhemikhali.
Ngaba kulungile ukusebenzisa okanye ukongeza ipolishi okanye ukusebenzisa isitywina seetafile zekartz?
Ngelixa ezinye iitafile zamatye zendalo zifuna amatywina okhuselo olongezelelekileyo ngokuchasene nokufuma kunye neebhaktheriya ezakhayo, imiphezulu yeetafile yequartz ayidingi kutywinwa okanye ukutywinwa konke konke.
Imiphezulu yeetafile zeQuartz zikwakhazimlisiwe ziinkampani zokwenza ngaphambi kokufakwa. Bahlala besebenzisa ipolish yokutywina yomgangatho ukuyigcina ikhazimla kwaye ibengezela. Ukongeza ipolishi engaphezulu kuya kuyenza into yokuba isithethi sakho se-quartz singasebenzi kakuhle kuba siyakwenza okuhlekisayo ngenxa yokuveliswa kwemveliso. Ilitye elinobunjineli kufuneka licocwe ngoomatshini kwaye kusetyenziswa nayiphi na imveliso engavunyelwanga ukuphucula ukukhanya kwayo kuya konakalisa kuphela i-quartz countertop yakho.
Izithuba ezinxulumene noyilo lwekhitshi onokuthi uzithande:
Imiphezulu yeetafile Granite - Iindleko zokuLungiswa kweKhitshi - Iindidi zeekhitshi zokubala
ndiyikhuphe ngaphandle kweentombazana ezinqunu
ikhadi lokhuseleko loluntu liguqula umtshato
Umyalelo wenkonzo yomtshato
iringi yomtshato ngasekunene